စံပယ်ပန်း: January 2013
မစံပယ်တို့က အမေ့ကိုစပြီး မာမီမာသားအမေလို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်..။ အခုတော့ဖုန်းခေါ်ရင်း အတိုကောက် မားသားလို့ပဲခေါ်ပါတယ်..။ မစံပယ်တို့အမေက အိမ်မှာမနက်ခင်းစာဆိုလည်း တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်မတူအောင် လုပ်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်..။ ထမင်းကြော်၊ မုန့်တီဖတ်သုတ်၊ ခေါက်ဆွဲသုတ်..၊ ထမနှဲ..၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း..။ တစ်နေ့တစ်မျိူးမရိုးရအောင် ပူပူနွေးနွေးကျွေးလေ့ရှိပါတယ်..။ မစံပယ်တို့ငယ်ငယ်က ကျောင်းကမုန့်ဆိုင်သေးသေးလေးတွေကနေ နေကြာစေ့၊အချဉ်ထုတ်တွေတော့ စားတတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် လက်သုပ်စုံလိုမျိူးတွေကျတော့ စားလေ့မရှိပါဘူး..။ အမေက အပြင်စာတွေကို ကျွေးလေ့မရှိတာမို့ မစံပယ်လည်း အပြင်စာစားဖို့ဆိုရင် တွန့်နေတတ်ပါတယ်..။ နောက်မှသာ အိမ်နဲ့အဝေးမှာနေရတော့ အပြင်ထမင်းဆိုင်လိုမျိူးတွေမှာ ကြုံသလိုစားရတတ်ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် မစံပယ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားဖို့ပဲ အားထုတ်လေ့ရှိပါတယ်..။ဆီများများနဲ့ ဟင်းချိုမှုံ့တွေထည့်ချက်တတ်တဲ့ ကိုယ်မမြင်ရာမှာချက်တဲ့အပြင်စာတွေကိုစားရမှာ မစံပယ်နောက်တွန့်တတ်ပါတယ်..။
အစပိုင်းကတော့ အပြင်စာမစားတတ်ပဲရှိပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကောင်းကောင်းမချက်တတ်ပါဘူး..။ အခုမှ ဟိုဘလော့ဒီဘလော့ဖတ်ရင်း မစံပယ်မှာ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်း တော်တော်များများရှိလာပါပြီ..။ ကိုယ်တိုင်ချက်..၊ ကိုယ်တိုင်အ၀အပြဲစားရတာလည်း သဘောကျပါတယ်..။ လုပ်ရင်းနဲ့ပိုလုပ်တတ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ညနေက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အင်္ဂလန်ကဆရာမ နှမ်းလှော်နဲ့ပျားရည်နဲ့နှယ်စားနေတာတွေ့ရတာနဲ့ မစံပယ်လည်း မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တာ အမေ့လက်ရာလိုမျိူး နှမ်းပြစ်စားချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ထလုပ်လိုက်ပါတယ်..။ အမေတို့လာတုံးကယူလာတဲ့နှမ်းလှော်ထုတ်ကြီးကလည်း တစ်ဝက်လောက်ကျန်နေပါသေးတယ်..။ မြေပဲဆံရောဦးမလို့လုပ်တာ ရောရင်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး မရောဘဲထားလိုက်ပါတယ်..။
ဆီများနေပုံလုပ်နည်းကတော့ ဆီဒယ်ပိုင်းအရင်တယ်ပါတယ်..။ ဆီကျက်ရင် ဒီက၀ယ်တဲ့ထန်းလျက်ခဲသုံးခဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်..။ ထန်းလျက်တွေက အပူထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပျော်ပါတယ်..။ မစံပယ်က ဇွန်းနဲ့ထိပြီး ဆီထဲမှာ လှည့်မွှေပေးပါတယ်..။ မွှေရင်းနဲ့ထန်းလျက်ခဲက သေးသေးလိုက်လာပြီး ပျော်ကျသွားပါတယ်..။ ဆားနည်းနည်းနဲ့ မန်ကျည်းသီးမှည့်တကယ့်နည်းနည်းကို ရေဆေးပြီးထည့်ပါတယ်..။ ထန်းလျက်ချိူချိူထဲမှာ အဲဒီမန်ကျည်းနှစ်လေးစားလိုက်ရရင် အအီပြေသွားတတ်ပါတယ်..။ ခဏမွှေပေးပြီး ထန်းလျက်နံ့လည်းမွှေးနေပြီ..၊ အရောင်လည်းပိုညိုလာပြီဆိုမှ နှမ်းလှော်ကို လိုသလောက်(သင့်တော်သလောက်)လောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်..။ လင်းပန်ထဲကိုလည်း ဆီနည်းနည်းထည့်ပြီး ဇွန်းလေးနဲ့ပွတ်ပေးထားပါတယ်..။ လင်ပန်းနဲ့ထန်းလျက်နဲ့ကပ်မနေအောင်ပါ..။ ပြီးတာနဲ့ ထန်းလျက်နဲ့နှမ်းလှော်ဒယ်ပိုင်းကို လင်ပန်းထဲလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်..။ မစံပယ်လုပ်တာ ဆီထည့်တာနည်းနည်းများသွားလို့ ဆီတွေအပေါ်ကဝေ့တက်နေပါတယ်..။ ဇွန်းဖင်လေးနဲ့ မျက်နှာပြင်ညီအောင် လိုက်သပ်ပေးပြီး ဝေ့နေတဲ့ဆီတွေကို ပန်းကန်လေးထဲကို ကဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်..။ တကယ်ကတော့ မစံပယ်ဆီများများစားခဲပါတယ်..။ အခုတော့ သင့်တော်ရုံဆိုပြီး အရင်ကထက်တော့ ပိုစားနေပါပြီ..။
မစံပယ်က အချိူတွေ၊ အအီတွေ စားလှပါတယ်..။ အခုနှမ်းပြစ်လုပ်တာလည်း ဆီထည့်တာ မှန်းတာလွဲလို့ နည်းနည်းများသွားပါတယ်..။ ၅ ကျပ်သားနီးပါးလောက်ရှိသွားပါတယ်..။ ထန်းလျက်သုံးလုံးနဲ့ဆို ဆီကအဲလောက်မလိုတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ဆီကများလွန်းတော့ ပေါင်းမသွားဘဲ အပေါ်မှာအိုင်ထွက်နေတာကို ကဲ့ထားလိုက်ပါတယ်..။ ထမင်းလည်းအစားများပါတယ်..။ ၀က်ပုပ်ကြီးဖြစ်မှာစိုးပေမယ့် တခါတလေလည်းစားတာပါပဲ..။ တခါတလေတော့ လေ့ကျင့်ခန်းထလုပ်ပါတယ်..။ မလုပ်တာက များပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/30/2013 08:42:00 pm2comments
Labels: အချက်အပြုတ်, အမေ
OOP အခြေခံများ (သို့) C# အခြေခံများ..(အဆက်..။)
Comments ဆိုတာက Program ရေးနေရင်းနဲ့ Program ထဲမှာပဲ Program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းပြချက်တို့၊ Programmer အချင်းချင်း ရှေ့လူလုပ်တာကို နောက်လူသိအောင် ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုရေးပါတယ်ဆိုတာ ချိတ်ဆက်မိအောင်...၊ ကိုယ်ရေးတာကိုပဲ နောက်တစ်ခါပြန်အကြည့်မှာ ဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတာသိအောင် ရေးတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်..။ Program ကိုထိရောက်မှုမရှိစေပါဘူး..။ ဘယ်နှစ်ကြောင်းရေးရေး Program ကိုထိရောက်မှုမရှိစေချင်ရင်..၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ကုဒ်က သိပ်မသေချာရင် comment ပိတ်ထားခဲ့ရင် အဲဒီကုဒ်က Program ကို သက်ရောက်မှုမရှိစေတော့ပါဘူး..။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာက တစ်ကြောင်းတည်းဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်း line by line ဆိုရင် (//)မျဉ်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းချင်းရှေ့ကနေ ပိတ်သွားရပါတယ်..။
ကိုယ်ရေးတဲ့ Comment က တစ်ကြောင်းထက်ပိုတယ်..၊ စာတစ်ပိုဒ်လောက်ရှည်တယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်နှစ်ကြောင်းပဲဖြစ်နေနေ အစမှာ (/*) နဲ့ အဆုံးမှာ (*/)အဲလိုပိတ်ပေးရပါတယ်..။ ကြားထဲမှာ စာဘယ်နှစ်ကြောင်းရှိရှိ အစမှာတစ်ခါနဲ့ အဆုံးမှာ တစ်ခါပဲ စပေး၊ ပိတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..။
နောက်တစ်မျိူးက documentation comment ဆိုတာ ရှိသေးတယ်..။ XML file တွေကို comment ပိတ်တယ်ဆိုရင် သူတို့က file အမျိူးအစားတွေမို့ documentation comment နဲ့ပိတ်ရတယ်..။ tag အစကနေ line by line စာကြောင်းဆုံးသလောက် တစ်ကြောင်းချင်းရှေ့မှာပိတ်သွားရမယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/26/2013 12:08:00 am0comments
Labels: Education, OOP
Cover Letter ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလည်း - နိဂုံးပိုင်း
ဒီတခါတော့ နောက်သိပ်အရေးကြီးတာတခုပြောပြချင်ပါတယ်၊အဲဒါကတော့ Cover Letter ရေးတာပါပဲ၊ တကယ်တော့ cover letter ဆိုတာမိတ်ဆက်စာပေါ့။ အလုပ်ခန့် မဲ့သူ၊scholarship ပေးမဲ့သူကို လက်တို့ ပြီး”ခင်ဗျားတို့ ကျနော့ CVကိုဖတ်ကြည့်စမ်းပါ၊ကျနော့မှာခင်ဗျားတို့ အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အရည်အချင်းတွေရှိတယ်ဗျ၊ ခင်ဗျားတို့ သဘောကြ မှာပါ“…ဆိုတဲ့စာမျိုးပေါ့။
အဲဒီလိုcover letter မျိုး ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲ…
ကျနော်တို့ ဘယ်လိုရေးတတ်သလဲဆိုတော့….”Dear Sir/Madam, I would like to apply for this position of---.Please see attached my CV.”ကျနော် ခင်ဗျား ခေါ်တဲ့ အလုပ်ရာထူး၊နေရာ အတွက် လျောက်ထားချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျနော့CV ကိုကြည့်ပေးပါ….ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ CV မြင်ကထဲက..အလုပ်၊ scholarship လျှောက်တာဆိုတာ လူတိုင်းသိတာပဲ၊ဒီစာ၂ကြောင်းလောက်နဲ့ တော့ ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အမှိုက်ခြင်းထဲရောက်သွားမဲ့ cover letter မျိုးပေါ့။
အဲဒီတော့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားအောင်၊ကိုယ့်CV ချက်ချင်းဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲ…
ကျနော်အနေနဲ့ cover letter မှာ paragraph စာပုဒ် ၃ပုဒ် ရေးပါ လို့ အကြံပေးချင်တယ်၊ သိပ်မတိုလွန်း၊မရှည်လွန်းတဲ့စာကြောင်း၃/၄ကြောင်းပါတဲ့ စာပုဒ်တွေပေါ့။
ပထမ အပုဒ်က…ကိုယ့်အကြောင်းပြောပြတာပါ၊ကိုယ့်မှာ ဘယ်လို ဘွဲ့ ၊ဒီဂရီတွေရှိတယ်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံကဘာတွေ၊ ဘယ်လိုအရည်အချင်း၊ အောင်မြင်မှုမျိုးတွေရှိတယ်.. အစရှိတာတွေရေးပါ။(ကျနော်ရှေ့ မှာ ပြောခဲ့သလို ကိုယ်လျှောက်မဲ့ အလုပ်၊Scholarship programme နဲ့ ဆီလျှော်မဲ.အကြောင်းတွေပေါ့)
ဒုတိယအပုဒ်က…သူ့လုပ်ငန်းအကြောင်း နဲ့ အခု သူ ခန့်မဲ့ အလုပ်၊နေရာအကြောင်း ကိုယ်သိတယ် ဆိုတာ ပြောပြရမှာ။အဲဒါကတော့ အလုပ်တခုလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ရမယ့်company၊ လုပ်ငန်းအကြောင်း နဲနဲတော့သိနေ ရမှာပေါ့၊ ဘာလို.လဲဆိုတော့ အလုပ်ခန့် ရင် အဲဒီအဖွဲ့ အစည်းမှာသွားလုပ်ရမှာလေ။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မကို်က် လေ့လာထားရမှာပေါ့။ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်၊နေရာအတွက် ဆိုပုိုသိအောင်လုပ်ထားရအုန်းမယ်၊ (ဒါကလဲသိဖို့ လွယ်ပါတယ်၊အလုပ်ခေါ်တဲ့၊Scholarship ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာမှာရေးထားတာပဲ၊သေချာဖတ်ဖို့ ပဲလိုတာ။)အဲဒီိလို သူ့လုပ်ငန်းအကြောင်း၊အခု သူခန့်မဲ့ အလုပ်၊နေရာအကြောင်း ရေးပြလိုက်ရင်အလုပ်ခန့် မဲ့သူ၊ Scholarship ပေးမဲ့သူက သိပ်သဘောကြတာပေါ့၊ငါတို့ အလုပ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်၊ အလုပ်လျှောက်ကထဲ ကကောင်းကောင်ြး ပင်ဆင် ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ CV မဖတ်ရသေးဘူး၊cover letter နဲ့ကို ခင်ဗျားကိုတော်တော်အထင်ကြီးသွားပြီ၊လူဆိုတာကလဲ ကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်တစား ရှိရင် သိပ်သဘောကျ တတ်တာ မျိုးမဟုတ်လား။
တတိယအပုဒ် ကတော့အရေးကြီးအပုဒ်၊သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြတော့မယ့်အပုဒ်ပေါ့၊ ဘယ်လို ရေးရမလဲ ဆိုတော့…”ခင်ဗျားကလဲဒီလို အရည်အချင်း၊ဒီလိုအတွေ့ အကြုံရှိတဲ့သူရှာနေတယ်၊ကျနော့် မှာခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ အရည်အချင်း၊အတွေ့ အကြုံတွေရှိတယ်၊ဒါကြောင့် ကျနော့်ကိုသာခန့်လိုက်ရင် ခင်ဗျားအားကိုးရမှာပါ၊ခင်ဗျား အလုပ်အတွက် သိပ်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး.ဗျာ၊ကျနော်ကလဲ ကျနော်အရည်အချင်းတွေအစွမ်းကုန်သုံးနိုင်မဲ့ ခင်ဗျားအလုပ်ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်၊ဒါကြောင့် လျှောက်ဖြစ်တာ၊ CVလေးဖတ်ကြည့်ဘာအုန်း”…ပေါ့။
ဒီမှာနဲနဲပြောချင်တာက.. Dear Sir/Madam ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလုပ်/scholarship ခေါ်တဲ့သူရဲ့ နာမည်သိရင် နာမည်ထဲ့ရေး၊ ဌာနသိရင်ဌာန နာမည် ထည့်ရေးပါ၊အဲဒါက Dear Sir/Madam ဆိုတာထက် ပိုကောင်းတယ်၊ သူတို့ ကိုသိတယ်၊ပိုရင်းနှီးတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာ၊ခင်ဗျားတို့ ပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ကိုယ့်ကို ဟိုလူကြီးလို့ ရမ်းအခေါ်ခံရ တာထက်..နံမည်ခေါ်ရင် ပိုကြိုက်၊ပိုမရင်းနှီး ဘူးလား။
ကဲ..ကျနော့ကတော့ အလုပ်ခန့်မဲ့သူ၊scholarship ခေါ်တဲ့သူ သေချာပေါက်ကြိ်ုက်မယ့်၊interview ချက်ချင်းခေါ်ချင်မယ့် CV နဲ့ Cover letter ဘယ်လိုရေး ရမယ်..ဆိုတာပြောပြီးပြီ။
အခုခင်ဗျားတို.အလှည်.ပဲ။စတွေး၊စရေးကြတော။၊ပြီးရင်အလုပ်ခေါ်တာတွေ၊Scholarship ခေါ်တာတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည်၊ရဲရဲဝင့်ဝင့်သာလျှောက်၊မကြာခင် Interview အတွက်လာဖို့ ဖုန်းသံကို ကြားရလိမ့်မယ်။
(တကယ်လို.CV နဲ့ Cover Letter ရေးထားတာ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရှိတိုင်ပင်ချင်ရင် ကျနော်ရဲ့ TOFLA email account ဖြစ်တဲ့ tofla2011@gmail.com ကိုပို့ ပေးပါ၊ကျနော်အားတဲ့အချိ်န် မှာတတ်နိုင် သမျှ စစ်ပေးပြီး လူငယ်တွေကို ကူညီ ပါ့ မယ်)
(နောက်သီတင်းပါတ်တွေမှာ အလုပ်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာနဲ့Interview ဖြေနည်းတွေရေးပေးပါ့မယ်)
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/25/2013 02:01:00 am0comments
ဒီ operatorsတွေက သိစရာတွေ ကျယ်ဝန်းပါတယ်..။ operators တွေမှာ Left to right အလုပ်လုပ်သလား..၊ Right to Left အလုပ်လုပ်သလားဆိုတာ ထည့်စဉ်းစားရပါတယ်..။ အဲဒီအတွက် ဦးစားပေး Level အဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဇယားရှိတယ်..။ Level အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်တာ အရင်လုပ်၊ နောက်လုပ်ကွဲသွားပါတယ်..။
ဆိုတဲ့ expression မှာ x နဲ့ y အရင်ပေါင်းမလား..။ y ထဲက z နူတ်တာကို အရင်လုပ်မလား..ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ..။ Level5မှာ + နဲ့ - တွေ့နိုင်ပါတယ်...။ Level2က အပေါင်းနဲ့အနူတ်က Unary တွေအတွက်ပါ..။ integer တွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး..။ ဒါကြောင့်မို့ အပေါင်းအလုပ် အရင်လုပ်ပြီးမှ အနူတ်အလုပ် လုပ်ရမှာပါ..။
ပေါင်းနူတ်မြှောက်စား ဥပမာတွေ စပေးပါမယ်..။
3 နဲ့4ပေါင်းရင်7ရတယ်..။ အဖြေကိုကြည့်လိုက်ရင် လွယ်လွယ်လေးပဲလို့ ဖြစ်သွားမှာပဲ..။ အဓိကက သူတို့ရေးတာကို နားလည်အောင်ကြည့်ရင်းက ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့ စဉ်းစားနည်းကို တတ်စေချင်တာပါ..။ Programming မှာ လိုချင်တဲ့ အဖြေကိုပဲ သိတာ..။ ဘယ်လိုရေးရင် ဒီအဖြေရမလဲ၊ ဒီအဖြေရဖို့ ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနည်းက အဓိကကျတာ..။
ဂဏန်းနှစ်ခုပေါင်းချင်တယ်..။ ဂဏန်းဆိုတော့ Type သတ်မှတ်ရင် int ပေါ့..။ ဒဿမကိန်းဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ဖို့လည်းလိုမယ်..။ uint မသတ်မှတ်တော့ပါဘူး..။ int နဲ့ပဲ တွက်မယ်..။3အတွက် int variable တစ်ခု၊4အတွက် int variable တစ်ခု သူတို့နှစ်ခု ပေါင်းလဒ်ထည့်ဖို့ int variable တစ်ခုလိုမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားထားရမယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/25/2013 12:25:00 am 1 comments
Cover Letter ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲ ( အပိုင်း - ၂ )
အရင်တပတ်ကရေးခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ရလာဒ်တွေကိုအခြေခံ တဲ့ summary မျိုး ရေးပြနိုင်ရင်.. (ဥပမာပေးခဲ.သလို စတိုးဆိုင်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ.တယ်ဆိုရင် ကိုယ်.ကြောင့် တနှစ်မှာ ဘယ်လောက် ရောင်းအားတက်လာတယ်၊ ဖောက်သည်ဘယ်လောက် တိုးအောင်လုပ်နိူင်ခဲ.တယ်…ဆိုတာမျိုး၊ ဥပမာ..အင်ဂျင်နီယာဆိုရင်လဲ ဘယ်ပရောဂျက်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းကို တာဝန်ယူခဲ့ /လုပ်ခဲ့ တုန်းက သတ်မှတ်ရက်အတွင်း/သတ်မှတ်ရက်ထက် ဘယ်လောက်စောပြီးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ…စတဲ့ ရလာဒ်တွေ၊အောင်မြင်မှုတွေ) ရေးပြနိုင်ရင်…ပျင်းပျင်းရိရိနဲ. CV ဖတ်နေနိုင်တဲ့ အလုပ်ရှင်တောင် ချက်ချင်း ထထိုင်ပြီး ခင်ဗျားတို့ ဆီ ချက်ချင်း ဖုန်း ဆက်လာနိုင်တယ်၊ ဒီလိုအရည်အချင်းရှိတဲ.လူမျိုး မလိုချင်တဲ့သူရှိမလား။
အဲဒီတော့ကိုယ်ဖက်က အဲဒီလို ရေးပြနိုင်ဖို့ ပဲလိုတာပေါ့ ၊အချိန်တခုပေးပြီး ငါဘာအောင်မြင်မှုတွေ၊ ရလာဒ်တွေရခဲ့ သလဲဆိုတာ စတွေးရ၊စအားထုတ်ရမှာပေါ.။
ကျနော် အလုပ်ရှာတုန်းက ဒီ summary ကိုရေးတော. ၅ ရက်လောက်ကြာတယ်၊ ငါ့မှာဘာအောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ.သလဲဆိုတာ တွေးလိုက်၊ရေးလိုက်၊ ပြင်လိုက်၊ပြန်ရေးလိုက်နဲ.ပေါ.၊ မြန်မာပြည်ကဆေးရုံ၎ခုမှာ ၁၀နှစ်ကျော်လောက်(နောက်ဆုံးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ကင်ဆာဋ္ဌာနမှာလဲ၅ နှစ်ကျော်လောက်) အလုပ်လုပ်ခဲ.ပါရဲ.၊လူနာတွေကုလိုက်ရတာလဲ အမြောက်အမြား၊ result ရလာဒ် စဉ်းစားကြည့်တော့ စဉ်းစားရ တော်တော်ခက်တယ်၊ ဘာလို.လဲ ဆိုတော. ကျနော်တို.ဆီမှာ result ရလာဒ် တွေကို တို်င်းတာတဲ. စနစ် Metrics တွေ၊ KPI(Key Performance Indicator)တွေက မဖွံ့ ဖြိုးတော. တိတိကျကျပြောရတာမလွယ်ဘူး။ ဒီဖက်မှာတော. အလုပ်တိုင်းရဲ. Result ရလာဒ်ကိုရအောင်တိုင်းတယ်၊ တဦးချင်းရဲ.အောင်မြင်မှုတွေ ကိုဆန်းစစ်တဲ.performance appraisal ဆိုတာလဲနှစ်တိုင်းလုပ်ရတယ်။ (ဒီအကြောင်း တွေကိုနောက်မှ.. ”လူကြီးတွေဖတ်ဖို.” ဆိုပြီးရေးအုန်းမယ်)
ဒါပေမယ့်ကျနော်ပြောရဲတယ်၊အလုပ်လုပ်နေတဲ.သူတွေအားလုံးမှာအောင်မြင်တဲ့result ရလာဒ် တခုမဟုတ်၊တခု တော့ရှိတယ်၊ကျနော်တို့ စနစ်တကျတွေးမထားလို့ သာ။ဘွဲ.ရခါစ လူငယ်တွေဆိုရင်လဲ ကျောင်းတုန်းက ဘာသာရပ်တွေ မှာ၊ကျောင်းတွင်း၊ကျောင်းပြင် လုပ်ခဲ့တဲ့ activity တွေမှာအောင်မြင်မှုresult တွေရှိခဲ.လိမ်.မယ်၊ အနည်းဆုံး ၅ ရက်..တပတ်လောက်တော့တွေးကြည့် ၊ ရေးပြစရာ အောင်မြင်မှုတွေတွေ့လာလိမ်.မယ်၊
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်၂ချက်ကို အလေးထားပြောချင်တယ်……
ပထမအချက်က ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ အလုပ် ၊ကိုယ်လဲအမှန်တကယ်စိတ်စားတဲ့အလုပ် ကိုရှာပါ၊ (အလုပ်ရချင်ဇောနဲ့ ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အလုပ်သွားမလျှောက်န၊ဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ မပျော်၊ရှေ့ ဆက်လဲ တက်လမ်းရှိ မှာမဟုတ်ဘူး) ပြီးတော့ ကိုယ်လျှောက်မဲ.အလုပ် နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အရည်အချင်း နဲ.အောင်မြင်မှုတွေ ကို Summary မှရေး ပါ။ ဥပမာ..ကိုယ်ကကွန်ပြူတာလဲ ကောင်းကောင်းသုံးတတ်တယ်၊ ဘောလုံးကန်လဲ တော်တယ်ဆိုပါဆို.၊ကိုယ်လျှောက်မဲ. အလုပ်ကရုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာသုံးဖို့ လိုနိုင်တယ်ဆိုရင် summary မှာကွန်ပြူတာသုံးတတ်တာကောင်းကောင်း အလေးထားရေးပါ၊ ဘောလုံးကိုတော့ နောက်ရေးမဲ.other skills အခြားကျွမ်းကျင်မှုများ နေရာမှာထဲ.ပေါ.။ တကယ်လို့ ကိုယ်လျှောက်မဲ.အလုပ်က အားကစားနဲ. ပတ်သက်ရင်တော့ ဘောလုံးကန်တော်တာ summary မှာ အလေးပေးရေးပေါ့၊ဒါကြောင်. မိမိရဲ.CV ကို လျှောက်မဲ့အလုပ်နဲ့ဆီလျှော်အောင်ရေးနိုင်ဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်၊ CV ကို လျှောက်မဲ့အလုပ်နဲ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်နေဖို.လိုမယ်၊CV တစောင်ရေးပြီး အလုပ်အားလုံး ကို တပုံစံထဲလိုက်လျှောက်နေလို.တော့ အလုပ်ရှင်ချက်ချင်းခန့် ချင်တဲ့ CV မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒုတိယအချက် က.. ဘွဲ.ရကာစလူငယ်တွေ(fresh graduate ) အတွက်ပါ။ ငါတို.ကအခုမှကျောင်းပြီးတာ၊ ဘာအတွေ.အကြုံမှလဲမရှိဘူး၊ အလုပ်ရဖို. မလွယ်လောက်ပါဘူး လို.စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ ။တချို.အလုပ်တွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေ က fresh graduate ကို အချို့ အလုပ်တွေ (ဥပမာ..ကျွမ်းကျင်မှု သိပ်မလိုတဲ.အလုပ်တွေ) မှာခန့် ဖို.စိတ်ဝင်စားကြတယ်၊ အလုပ်သင်သဘောပေါ.၊ လစာကတော့အစမှာနဲနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ရာထူးတွေဆက်တက် သွားတာပါပဲ၊ တကယ်လဲကောင်းပါတယ်၊ အတွေ.အကြုံသိပ်မရှိသေးခင်မှာလစာလဲရ၊ပညာလဲရပေါ ။၊လွန်ခဲ.တဲ.၃နှစ်လောက် က စင်္ကာပူ MDIS Management Institute က ကျောင်းပြီးကာစ စင်္ကာပူသူလေးတယောက်ကို ကျနော်ဆီမှာ သုတေသန လက်ထောက်အဖြစ် ခန်.ဖူးတယ်၊သူကလဲတော်ပါတယ်၊ အလုပ်လဲ ကြိုး ကြိုးစားစား ရှိတော.သင်လွယ်၊တတ်လွယ်တယ်၊ အခုတော.နေရာကောင်းကောင်း၊လစာကောင်းကောင်းရနေပြီ။ ဒါကြောင်.fresh graduate တွေအားမလျှော့ နဲ့၊ ရိုးရုိုးသားသား၊ကြိုးကြိုးစားစားသာလုပ်၊ဘာမှမအောင်မြင်စရာမရှိဘူး။
Summary of qualification and achievement (ကိုယ်.ရဲ. အရည်အချင်းနဲ့ အာင်မြင်မှုအကျဉ်းချုပ်) အကြောင်း ကျနော် ပြောခဲ့တာတွေ ကိုပြန်ချုပ်ကြည့်ကြရအောင်။
အဲဒီ Summary မှာအချက်၎/၅ ချက်လောက်ရေးပေးပါ၊ပထမ ၂ချက်၊၃ချက်က မိမိအလုပ်/ကျောင်း ကအရည်အချင်းနဲ. အောင်မြင်မှုတွေရေးပါ၊နောက်တချက် ကother relevant skills အခြားဆက်စပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ(ဥပမာ..English,computer စသဖြင့်)၊နောက်ဆုံးအချက်က interpersonal skill လူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာအရေးပါတဲ.skills တွေ(ဥပမာ..organizing skill စည်းရုံးရေးကောင်း တဲ့ skillတို.၊ team work အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့skillတို့ ပေါ)့၊အလုပ်ရှင်ဟာ အလုပ်ကအရည်အချင်းအပြင် အဲဒီလို လူမှုဆက်ဆံရေး skillကောင်းတဲ့သူတွေကိုပိုသဘောကျကြတယ်၊ဘာလို.လဲဆိုတော့ အလုပ်ဆိုတာ လူတွေနဲ့ လုပ်ရမှာမဟုတ်လား။
ကဲ..အဲဒီတော. CVရေး ပြီဆိုရင်….
summary of qualification and achievement(ကိုယ်.ရဲ.အရည်အချင်းနဲ. အောင်မြင်မှုအကျဉ်းချုပ်)ရေး ။
ပြီးရင် ရှေ့ ကရေးခဲ့ တဲ့ summary(အကျဉ်းချုပ်) ကိုအသေးစိတ် အကျယ်ရှင်းပြမဲ့...
Educational qualification(ပညာရေး-ဘွဲ့ ၊ဒီဂရီတို့ )၊
working experience(လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ)၊
other relevant skills(အခြားဆက်စပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ)၊
referees (ကိုယ်ကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူတယောက်၊၂ယောက်) ဆက်ရေးပေတော.။
(ပိုပြီး စဉ်းစားရ၊ရေးရတာလွယ်တဲ့နည်းက..ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြတာတွေကိုအရင်ချရေးကြည့်၊...ပြီးမှ summary(အကျဉ်းချုပ်) အတွက် ကိုယ်အလေးပေးပြောချင်တဲ့ point တွေပြန်စဉ်းစား၊ပြန်ရေး တဲ့နည်းပါပဲ။၊ရေးကြည့်ပါ၊လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။)
Summary ကိုတောင်တော်တော်ကြိုက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အလုပ်ရှင်ဟာ ဒီအသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို စိတ်ဝင်တစားဆက်ဖတ်လိမ့် မယ်၊ မပူနဲ.၊ ဒီလိုလူမျိုးဘယ်မှာလက်လွှတ်ခံပါ့မလဲ။
(ဒီတပတ်တော့ စာတော်တော်ရှည်သွားပြီ၊ နောက်တပတ်မှ CV format ပုံစံလေးနဲ့ Cover letter အကြောင်းဆက်ရေးပေးပါမယ်…)
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/24/2013 12:52:00 pm0comments
CV နဲ့ Cover Letter ဘယ်လိုရေးရင် ကောင်းမလဲ
ဒီတခါတော. CV နဲ. cover letter ရေးနည်းအကြောင်းပြောပြချင်တယ်၊ဘာလို.လဲဆိုတော.CV ဟာကိုယ်ရဲ.အရည်အချင်း၊အတွေ.အကြုံ၊ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြောပြမဲ.အလွန်အရေးကြီး document မှတ်တမ်းတခုပါ။
(CV ဟာမိမိအကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြတာဖြစ် ပြီးacademic institute တွေ၊Scholarship programme တွေမှာပိုသုံးတယ်၊အလုပ်အတွက်ကတော.အကျဉ်းချုပ်ရေးထားတဲ. Resume ဆိုလုံလောက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ်.ဒီမှာတော. အားလုံး နဲ. familiar ဖြစ်မဲ. CV လို.သုံးနှုန်းပါ.မယ်)
အလုပ်စလျှောက်တဲ.အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊အလုပ်ထဲမှာpromotion အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ scholarship လျှောက်တဲ.နေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် CV ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်၊ ကိုယ်.အရည်အချင်းကို ရွေးချယ်မဲ.သူသိအောင် စပြီးပြောပြနိုင်တဲ. Document ပဲပေါ.၊
လူ လူချင်းတွေ. ရင် first impression ပထမဆုံး ကိုယ်အပေါ် သူ.ရဲ.အထင်အမြင်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုရင် လူချင်းမတွေ.ခင် မိမိကိုရွေးချယ်မဲ.သူဖတ်မဲ.CV ဟာ အထင်အမြင်သိပ်ကောင်းနေဖို.လိုတာပေါ.၊ကိုယ် ရဲ.CV ဖတ်ပြီးတာနဲ.ကိုယ်.ကို interview ခေါ်ချင်စိတ်၊အလုပ်ခန်.ချင်စိတ်၊Scholarship ပေးလိုစိတ် ပေါက်သွားအောင်ရေးရမှာ။
အဲဒီလိုCV မျိုး၊ Cover letter မျိုး ဘယ်လိုရေးမလဲ?
အခုတော.ပြောင်းလဲနေပြီလား မသိဘူး၊အရင်တုန်းကတော. CV ရေးဖို.လိုရင် မိတ်တူဆိုင်၊ကွန်ပြူတာဆိုင်က form ယူ ပြီး ဖြည်.ချင်ရင်ဖြည်.၊ပိုသပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်စေချင်ရင် ကွန်ပြူတာစာစီခိုင်းလိုက်တာပေါ.၊ အမည်၊မွေးသကရစ်၊ လုမျိုး။ ဘာသာ၊ဖခင်အမည်…အစရှိ တဲ. ready-made ပုံစံကိုဖြည်.လိုက်တာပါပဲ။
အရင်ကကိုယ်တိုင်လဲအလုပ်ရှာခဲ.။အခုလူတွေကိုအလုပ်ခန်.တော.မှ..လူမျိုးတို.၊ဘာသာတို.ဆိုတာ အရေးမှမကြီးပဲ၊ဘယ်လူမျိုး။ဘယ်ဘာသာမဆို ကိုယ်.အလုပ်အတွက်အရည်အချင်းရှိတဲ.သူဆို အလုပ်ခန်.မှာပဲ၊ အဖေအမည်ဆိုပိုတောင်မှ မသိချင်သေးတယ်။လွန်ခဲ.တဲ.နှစ်တွေက ကျနော.ဋ္ဌာနမှာ ဒေသဆိုင်ရာ မန်နေဂျာတယောက်နဲ.ကင်ဆာဆရာဝန်တယောက် လို်.တော. မန်နေဂျာရာထူးအတွက် မွန်ဘိုင်း(ဘုံဘေ)ကတယောက် နဲ. ကင်ဆာပညာရှင် ရာထူးအတွက် တရုတ်ပြည်က ကင်ဆာအထူးကုဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူက PhD ရထားတဲ.သူတယောက် ကို ကျနော် ခန်.ခဲ.တယ်၊ လူမျိုး၊ဘာသာတွေ အရေးမကြီးပါဘူး၊အခြားဋ္ဌာနတွေ၊companyတွေမှာ လဲ ဒီလိုဘဲ၊ကိုယ်လိုချင်တဲ. အရည်အချင်းရှိရင်အလုပ်ခန်.မှာပဲ။
ပြောချင်တာက…ကျနော်တို.ကမလို အပ်တဲ.အချက်အလက်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ.(ရွေးချယ်မဲ.သူ စဖတ်မဲ.) ပထမစာမျက်နှာ ရဲ. အပေါ် ပိုင်းတ၀က်လောက်ကိုဖြုန်းပစ်လိုက်တာ။
ပထမ အမည်၊နောက်က ပညာရေး(ဘွဲ.)နဲ.ဆက်သွယ်ဖို.လိပ်စာ(ဖုန်းနံပါတ်)ရေးပြီးရင် summary of qualification and achievement(ကိုယ်.ရဲ.အရည်အချင်းနဲ.အောင်မြင်မှုအကျဉ်းချုပ်)ကို စရေးပါ၊ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်၊ တကယ်တော.အလုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်၊scholarship ပေးမဲ. university ကဖြစ်ဖြစ် ဒါကိုသိချင်တာ။ ကိုယ်ရဲ.အလုပ်အတွက် လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ပါ.မလားဆိုတာ စသိချင်တာ၊ မဟုတ်ရင် ရေရှည်မှာသူရော၊ကိုယ်ရောစိတ်ဆင်းရဲရမှာ။
အဲဒီတော. Summary of qualification and achievement ရေးရင် ကိုယ်.ရဲ. အရည်အချင်း၊အောင်မြင်မှု တခုစီကို bullet point တခု(စာကြောင်းတကြောင်းနဲ.)တိုတိုရှင်းရှင်းရေးပါ။၄/၅ ခုလောက်ပေါ.။
အရေးကြီးဆုံးက အဲဒီ summary မှာ ဘာတွေရေးရမလဲဆိုတာပဲ။
တကယ်ရေးရမှာ က Achievement-based မိမိအောင်မြင်မှုတွေကိုအခြေခံတဲ.CV မျိုး၊ summary မျိုးရေးရမှာ၊ ဘာလုပ်ခဲ.တယ်ဆိုတာထက် result-orientated ဘယ်လို result အောင်မြင်မှု တွေရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ.တယ် ဆိုတာကုို နိုင်ငံတကာမှာ ပိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ ဥပမာ..စတိုးဆိုင်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်း လုပ်ခဲ.တယ်ဆိုရင် ကိုယ်.ကြောင်. တနှစ်မှာ ဘယ်လောက်ရောင်းအားတက်လာတယ်၊ ဖောက်သည်ဘယ်လောက်တိုးအောင်လုပ်နိူင်ခဲ.တယ်.အစရှိသဖြင်.ပေါ.။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/24/2013 12:47:00 pm0comments
အတွက်အချက်အတွက်သုံးမယ့် Arithmetic Operators တွေအကြောင်းရောက်ပြီ..။ +,-,*,/တွေ အကြောင်းပြောတော့မယ်..။ အခြေခံဆိုပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ အရာကျယ်တယ်..။ Core Concept တွေဖြစ်ပြီး ကျန်တာတွေက သူတို့ကနေ ချဲ့ချဲ့သွားတာတွေဖြစ်တယ်..။ ပေါင်းနူတ်မြှောက်စားတွေအပြင် (%)ကို အကြွင်းအတွက်နဲ့ binary operation တွေအတွက်လည်း သေချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ operators တွေ ရှိပါသေးတယ်..။
x now 7--> x+=2;
ဒီ operator တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ (C,C++,Java,C#) language တွေအားလုံး အတူတူပါပဲ..။
တန်ဖိုးတိုးသွားတာနဲ့ လျော့သွားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့မှာ (++)နဲ့(--)လို့ operation နှစ်ခုရှိတယ်..။ ဒီ operator တွေကိုသုံးတာက ရှင်းရှင်းလေးပါ..။ ၁ ပေါင်း ၁ နူတ် လုပ်သွားတာပါပဲ..။
ဒီလက္ခဏာနှစ်ခုက variable ရဲ့ရှေ့မှာ ရှေ့မှာလည်းရှိတယ်..။ နောက်မှာလည်း ရှိတယ်..။ ရှေ့နောက်နေရာကွာတာနဲ့အမျှ အကျိူးသက်ရောက်မှုလည်း ကွာသွားတယ်..။ ဒီလက္ခဏာက variable ရဲ့ရှေ့မှာရှိရင် variable ကိုမသုံးခင် သူ့အကျိူးသက်ရောက်မှုက အရင်ဖြစ်သွားတယ်..။
(++)လက္ခဏာကို variable နောက်မှာထားရင် variable တန်ဖိုးကို assignအရင်လုပ်တယ်..။ assign လုပ်ပြီးမှ ၁ တိုးတာ လုပ်တယ်..။
(?:)ဆိုပြီးထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာလေးရောရှိတယ်..။ အဓိပ္ပာယ်က if then else statement ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ..။ ? နဲ့ : နဲ့ operand သုံးမျိူးကြားမှာ ခွဲထားတာပါ..။ ပထမ operand က Boolean Expression ပါ..။ Boolean Expression ကလုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ကမှန်သွားရင် ? နောက်က variable ရဲ့ result ထွက်မယ်..။ မမှန်ရင် (:) နောက်က result ထွက်မယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/24/2013 12:04:00 am0comments
အခုပြောမယ့်ဟာတွေက output ထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ C#အသုံးလေးပါ..။ ပုစ္ဆာတွေတွက်ရင် လိုမှာမို့ ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်..။
user ကစာကြောင်းအနေနဲ့ပဲ ရိုက်ထည့်လိုက်တော့..။ string အနေနဲ့ပဲ ၀င်လာတယ်..။ တကယ်လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့စာကြောင်းမှာ အသက်လို၊ လခလို ကိန်းဂဏန်းတွေပါလာခဲ့ရင် စာကြောင်းအနေနဲ့ဝင်လာတဲ့ဂဏန်းတွေကို ဂဏန်းတန်ဖိုးဖြစ်အောင် ပြန်ပြောင်းပေးရမယ်..။
Console ဆိုတဲ့ class က output ထုတ်ပေးဖို့ .Net Library ထဲမှာ ရှိပြီးသားဟာပါ..။ Console class ထဲမှာ WriteLine method, Write method တွေရှိတယ်..။ WriteLine ကစာတစ်ကြောင်းချင်း တစ်လိုင်းချင်းရေးသွားတဲ့နည်း..။ Write ကတော့ တစ်ကြောင်းချင်း တစ်လိုင်းချင်းမချဘူး..။ ကိုယ်ရေးလိုက်သလို Format လေးအတိုင်း output ကိုထုတ်ပေးတာပါ..။
Value မတူတာတွေကို Output တစ်ခါတည်းထုတ်ဖို့ရာ WriteLine()method မှာရှိပါတယ်..။ output ထုတ်ချင်တဲ့ format ကို ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ တန်ဘိုးနဲ့ နေရာတွေသတ်မှတ်ပေးပြီး ထည့်ပေးလိုက်တာပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/21/2013 08:46:00 pm0comments
လိုအပ်လာတဲ့ တခါတရံမှာ Type တွေအချင်းချင်း အကူးအပြောင်း လုပ်ပေးရတာတွေ ရှိပါတယ်..။ int ကနေ long ကိုပြောင်းတာ..။ double ကနေ int ပြန်ပြောင်းတာတွေ ရှိလာပါတယ်..။ ဒီလိုပြောင်းရာမှာ နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်..။
Implicit Conversion Explicit Conversion
Implicit Conversion ဆိုတာ သေးတဲ့ခွက်ထဲကနေ ကြီးထဲခွက်ထဲပြောင်းထည့်တာမို့ သူ့ဒေတာတွေ ဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူး..။ Explicit Conversion မှာတော့ ကြီးတဲ့ခွက်ထဲကနေ သေးတဲ့ခွက်ထဲပြောင်းတာမို့ ဒေတာတစ်ချို့ ဆုံးရှုံးတာ ဖြစ်ပေါ်မှာပါ..။ မြင်သာအောင် ဥပမာတွေ ပြလိုက်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/20/2013 11:41:00 pm0comments
တနယ်တကျေးမှာနေကြသူတွေ အလျဉ်းသင့်သလို အဆင်ပြေသလို တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းနေကြရတာ မထူးဆန်းပါဘူး..။ အိမ်ပြောင်းရင် ဘယ်လိုလေးက အဆင်ပြေသလဲဆိုတာ အတွေ့အကြုံလေး ဝေမျှချင်လို့ပါ..။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က မစံပယ် အိမ်နှစ်ခါ ပြောင်းရပါတယ်..။
ပထမတစ်ကြိမ်ပြောင်းတုံးက မစံပယ်နဲ့အတူနေတဲ့သူငယ်ချင်းက မြန်မာနိုင်ငံ ခဏပြန်သွားချိန်မို့ သူ့ပစ္စည်းတွေထုပ်ပိုးထားခဲ့တာတွေကိုပါ မစံပယ်တစ်ယောက်တည်းက ပြောင်းပေးခဲ့ရတာပါ..။ မစံပယ်တို့ဆီက မောင်လေးတစ်ယောက်က လာကူသယ်ပေးလို့ မစံပယ်က ကားငှားတော့ အလုပ်သမားထည့်မငှားခဲ့ပါဘူး..။ အဲဒီတုံးက မစံပယ်ကအလုပ်ကနေခွင့်ယူပြီးပြန်လာပြီးမှ ပစ္စည်းလက်စသပ်သိမ်းရတာပါ..။ မစံပယ်ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးချိန်ထိ ၇ နာရီလာမယ်ဆိုတဲ့ ကားက မလာသေးလို့ မစံပယ်က ကားနဲ့ပါလာမယ့် ထရော်လီကို စောင့်ပြီး ပစ္စည်းတွေကို ဧည့်ခန်းမှာပဲထားပြီး စောင့်နေခဲ့ပါတယ်..။ ပစ္စည်းတွေကို ကားလာမယ့်နေရာထိ ကြိုချမထားမိပါဘူး..။
၇ နာရီလာမယ်ဆိုတဲ့ကားက ၈:၃၀ မှာလာပါတယ်..။ ကားလာမှ မစံပယ်တို့နှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းကိုပစ္စည်းကို Lift နားတစ်ခါရွှေ့..၊ ပုံထား..။ Lift ကနေ အောက်ကိုတစ်ခါချ..၊ Lift အထွက်မှာ ပုံထား..။ Lift အထွက်ကနေမှ ကားပေါ်တစ်ခါရွှေ့တင် အဲလိုအကြိမ်ကြိမ် လုပ်ရပါတယ်..။ မစံပယ်က အလုပ်သမားထည့်ငှားမထားလို့ ကားပေါ်ပါတဲ့လူနှစ်ယောက်ကို ကူသယ်ပါဦးလို့ အကူအညီမတောင်းပါဘူး..။ ကားပေါ်ကနေပဲ ပစ္စည်းတွေ နေရာချပေးစေရုံတင် လုပ်ပါတယ်..။ ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးလို့ မောမောပန်းပန်းနဲ့ ကားမောင်းသမားနားရောက်တော့ ဖုန်းပြောနေပါတယ်..။ မစံပယ်ကလည်း စောင့်ရလို့ စိတ်မရှည်လို့လား..၊ မောပန်းတဲ့အရှိန်ကြောင့်လား မသိပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်ကလိုက်ရမှာလဲလို့ မေးလိုက်ပါတယ်..။ ကားမောင်းသမားက လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပါ..။ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်က ပစ္စည်းအတင်အချအတွက်ပါ..။ သူတို့ကိုထည့်ငှားရင် တစ်ဈေး..၊ ထည့်မငှားရင် တစ်ဈေးပါ..။ မစံပယ်က ထည့်ငှားမထားပါဘူး..။ အဲဒီလူနှစ်ယောက်က ကားမောင်းသမားဘေးကနေပဲ လိုက်မယ့်ပုံတွေ ပြနေပါတယ်..။ နောက်ခန်းက ပစ္စည်းထည့်တဲ့အခန်းကို ပိတ်နေကြပါတယ်..။ နောက်ခန်းကိုပိတ်လိုက်ရင် သူတို့နှစ်ယောက်က ကားသမားဘေးထိုင်ရင် မစံပယ်နဲ့ မစံပယ်မောင်လေးက ဘယ်မှာထိုင်ရမှာလဲလို့ ကားမောင်းသူကိုသွားမေးတော့ ကားငှားပြီးရှေ့ကသွားပါတဲ့..။ မစံပယ်လည်း အံ့သြပြီးဘာမှပြန်မပြောဘဲ ကားငှားမယ့်ဖို့ လမ်းပေါ်ထွက်အသွားမှာမှ ကားမောင်းသမားက သူ့လူနှစ်ယောက်ကို ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့နောက်ကပဲ တံခါးဖွင့်လိုက်ခဲ့ကွာဆိုပြီး ပြောပါတယ်..။ အဲဒီတော့မှ မစံပယ်တို့ကို လာ ဆိုပြီး ရှေ့ခန်းကခေါ်ပါတယ်..။
ကားသမားက ပစ္စည်းဟောင်းတွေဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းတဲ့အလုပ်လည်း လုပ်ပါတယ်..။ ပရိဘောဂဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါတဲ့..။ ပိုင်ရှင်မို့လို့ အောက်သက်မကြေဘဲ မစံပယ်တို့ကို အထက်စီးကနေ နေပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံတာပါ..။ နောက်အိမ်ရောက်တော့လည်း ကားပေါ်ကပစ္စည်းတွေချပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းပြီးတာနဲ့ ကားထွက်သွားတာပါ..။ တစ်ကြောင်း ၅၀ ပေးရပါတယ်..။ ကားကကြီးပါတယ်..။
မစံပယ်က နောက်အဆင်ပြေတဲ့တစ်အိမ်အတွေ့မှာ ထပ်ပြောင်းချင်တာနဲ့ မစံပယ်သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ပြောင်းကြပါတယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ သူငယ်ချင်းမနဲ့ နှစ်ယောက်ပါ..။ ဒီတစ်ခါလည်း အလုပ်သမားမငှားပါဘူး..။ နှစ်ယောက်ထုပ်ပိုးသယ်ထုတ်ပြီး ခါးနာခံပြီး ကားလာမယ့်လမ်းကို ချထားပါတယ်..။ ကားက ၅ နာရီ ချိန်းထားပါတယ်..။ တော်တော်နဲ့မလာပါဘူး..။ ကားမလာတော့ မစံပယ်သူငယ်ချင်းက အခန်းကိုစစ်ရင်း အိမ်ရှင်တွေ ၆ နာရီရောက်မှာမို့ သော့အပ်ခဲ့ဖို့ စောင့်နေပါတယ်..။ မစံပယ်က သော့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ဆိုတော့ မစံပယ်သူငယ်ချင်းက မထားခဲ့ချင်ဘူး..။ သေချာအပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး စောင့်နေပါတယ်..။ ကားက ၅ ၃၀ လောက်မှာ ရောက်လာပါတယ်..။ မစံပယ်က ပစ္စည်းတွေတင်ပေးပါတယ်..။ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်က ကားပေါ်ကနေ နေရာချပါတယ်..။ ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ အရင်တစ်ခါလို သူတို့လာမှ အိမ်ထဲကပစ္စည်းထုတ်တာမဟုတ်လို့ ကူရမလို၊ မကူရမလိုနဲ့ ရှိူးတိုးရှန့်တန့်ဖြစ်စရာ မလိုလိုက်ပါဘူး..။ မစံပယ်လည်း ဒါကြောင့်မို့ ပစ္စည်းတွေ ကြိုချထားလိုက်တာပါ..။ ဒီတစ်ခါငှားတဲ့ကားက အရင်တစ်ခေါက်က ကားမဟုတ်တော့ပါဘူး..။ မစံပယ်တို့ပစ္စည်းတွေတင်တာ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်..။ ပစ္စည်းလည်းတင်ပြီးရော ကားကစက်နှိူးပြီး ခေါင်းလှည့်ပြီး ထွက်မလို့လုပ်တော့တာပါပဲ..။ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကလည်း နောက်ကပစ္စည်းတင်တဲ့အခန်းထံခါးဖွင့်ပြီး ကားပေါ်ရောက်နေပါပြီ..။ မစံပယ်က သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတယ်..။ သူငယ်ချင်းက ၁၅ မိနစ်လောက်လေးစောင့်ချင်သေးပေမယ့် ကားသမားကိုမပြောရဲပါဘူး..။ မစံပယ်ကလည်း မပြောမိပါဘူး..။ သူငယ်ချင်းလည်းဆင်းလာရော ကားသမားက မစံပယ်သူငယ်ချင်းကို မျက်စောင်းကြီးထိုးကြည့်နေပါတယ်..။ သူကလည်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပါပဲ..။ သူတို့ရောက်တာသာ နောက်ကျတာ..။ မစံပယ်တို့ကိုတော့ နည်းနည်းမှ စောင့်မပေးချင်ပါဘူး..။ မစံပယ်သူငယ်ချင်းမလေးကိုလည်း မျက်စောင်းကြီးခုတ်ကြည့်တာ မစံပယ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကိုတောင် သနားပါတယ်..။
နောက်အိမ်ရောက်တာနဲ့ ကားပေါ်ကပစ္စည်းတွေချပေးပြီးတာနဲ့ ကားပြန်ထွက်သွားပါတယ်..။ မစံပယ်တို့မှာ ပစ္စည်းတွေအခန်းထဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်ပြီး အိမ်အဟောင်းမှာ သော့သွားအပ်ရပါတယ်..။ မစံပယ်တို့ကပဲ မပြောတတ်မဆိုတတ်လို့လား..၊ သူတို့ကပဲ စိတ်မရှည်တာလား မသိဘဲ မစံပယ်အိမ်ပြောင်းတိုင်း စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ ၊ ၅ လလောက်က မစံပယ်အသိတစ်ယောက် အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာသိရတော့ မစံပယ်သွားကူပေးပါတယ်..။ အလုပ်သမားငှားရင် ပိုက်ဆံပိုကုန်မှာစိုးလို့ ကူညီပေးတာပါ..။ အဲဒီအစ်မက အလုပ်ကနေလုပ်ရင်းတန်းလန်း အိမ်ပြောင်းရမှာပါ..။ ပစ္စည်းက လက်စသပ်စရာတွေ ကျန်သေးတယ်..။ မစံပယ်တို့မရောက်ခင်ပဲ ကားကရောက်နေပါပြီ..။ မစံပယ်က တော်တော်စိတ်ပူသွားပါတယ်..။ မစံပယ်တို့အိမ်ပြောင်းတုံးက ပစ္စည်းတွေအကုန်အောက်ရောက်ပြီးတာတောင် ကားသမားတွေက ခဏလေးမစောင့်ချင်ဘူး..။ အခုက ပစ္စည်းတွေက လက်စတောင်မသပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ မစံပယ်တွေးလိုက်တာ..။ ကားသမား အော်တာခံရတော့မှာပဲလို့...။ ဒါပေမယ့် အိမ်ရွှေ့မယ့်အစ်မကတော့ အေးဆေးပါ..။ ကားသမားက သဘောကောင်းတယ်တဲ့..။ လောစရာမလိုဘူးတဲ့..။ မစံပယ်က ပစ္စည်းတွေမြန်မြန်လက်စသပ်သိမ်းပေးတုန်း သူက အိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့ အခန်းခရှင်းနေပါတယ်..။ အကုန်ပြီးတာနဲ့ မစံပယ်ကအခန်းပြင်ထုတ်ပေးပါတယ်...။ နောက် ကူသယ်ပေးဖို့ မောင်လေးတစ်ယောက်လည်း ခင်ရာမင်ရာလာကူပါတယ်..။ သူကလည်း အခန်းအပြင်ကို ထုတ်ပါတယ်..။ အပြင်ကနေ ကားသမားမောင်လေးက သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ထရော်လီပေါ်စုတင်ပါတယ်..။ သူကတစ်ခါတည်းတင်ပြီး တစ်ခါတည်းကားပေါ်ထိ သွားတင်ပါတယ်..။ မစံပယ်က မစံပယ်တို့ထုံးစံအတိုင်း Lift နားတစ်ခါရွှေ့..၊ အောက် တစ်ခါရွှေ့..၊ ကားနာတစ်ခါရွှေ့.. ။ သုံးခါရွှေ့ပြီး ကားပေါ်တင်ပါတယ်..။ ကားကတော့ သေးပါတယ်..။ တစ်ယောက်တည်းသမားတွေပြောင်းရင် မဆန့်မရှိပါဘူး..။ ဒီအစ်မပစ္စည်းက မစံပယ်တို့နှစ်ယောက်စာထက် များပါတယ်..။ မစံပယ်တို့ပါ ကားပေါ်တက်ပြီး ကားသမားနဲ့ နောက်မောင်လေးက ကားရှေ့ကတက်ပြီးအဆင်ပြေပြေပါတယ်..။ အစ်မကြီးက ကားစက်နှိူးပြီးတာကို ဖုန်းဆက်လို့ မပြီးသေးပါဘူး..။ အကုန်ကားပေါ်ရောက်တာကို သူ့တူမစောင့်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီး ကားစက်နှိူးရက်ကြီး ၁၅ မိနစ်ကျော်ကျော်လောက် စောင့်ရပါတယ်..။ ကားသမားမောင်လေးနဲ့ မစံပယ်တို့ အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ပြီး ရယ်စရာတွေ ပြောနေခဲ့ကြပါတယ်..။
နောက်အိမ်ရောက်တော့လည်း ပစ္စည်းတွေကို အခန်းထဲထိ အခေါက်ခေါက်သယ်ပေးပါတယ်..။ အစ်မကြီးက ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းနေရာချနိုင်ပြီဆိုမှ သူငယ်ချင်းကူစရာရှိလို့ သွားမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံရှင်းပြီးတာနဲ့ မစံပယ်တို့ကိုပါ ဘူတာရုံတစ်ခါတည်းချထားပေးပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်..။ မစံပယ်မှာ ကိုယ်ကြုံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ တစ်ခြားစီမို့ အံသြနေမိပါတယ်..။ ကားက တစ်ကိုယ်ရေသုံး အလတ်စားလေးဖြစ်ပါတယ်...။ ပိုက်ဆံကလည်း ၃၅ ဒေါ်လာပဲ ယူပါတယ်..။ တစ်ရက်ကို တစ်ယောက်ပဲ လိုက်ပြောင်းပေးပါတယ်တဲ့..။ သဘောကောင်းကောင်း လူငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်..။ မစံပယ်လည်း အိမ်မပြောင်းဖြစ်သေးလို့ သူ့ကိုခေါ်စရာမလိုသေးပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့သူတွေ ငှားနိုင်အောင်လို့ ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါ...။ နာမည်က Oak Max ပါတဲ့..။ မြန်မာနာမည် မသိပါဘူး..။ ဖုန်းနံပါတ်က ၈၆၁၂ ၉၀၀၁ ပါ..။ တခါတလေ ယောကျာ်းလေးတွေကိုပြောင်းပေးရင် နှစ်ခေါက်ပြန်သယ်ပေးတာတွေလည်း လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့..။ အိမ်သစ်ရောက်မှ သော့ပါမလာလို့ သော့လိုက်ရှာပေးရတာတွေပါ ရှိပါတယ်တဲ့..။ သဘောကောင်းတဲ့ မောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ..။ ကားသေးပေမယ့် သေချာထည့်တော့ ဆန့်ပါတယ်..။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေချာထည့်ပေးပါတယ်..။
မစံပယ်မှာ ဒါလေးပြန်အမှတ်ရမိလို့ မရေးဘဲမနေနိုင်ပါဘူး..။ ပင်ပင်ပန်းပန်းအိမ်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာ စိတ်ကသိကအောက်မဖြစ်ရဖို့လည်း လိုသေးတယ်လေ..။ မစံပယ်အသိတွေကိုလည်း ဖုန်းနံပါတ်လေး ပေးပေးထားပါတယ်..။ လိုအပ်ရင်သိထားအောင်လို့ပါ..။ ကဲ.. ဘလော့လာတဲ့ ရွှေပွဲလာတွေလည်း အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ဆို ဖုန်းဆက်လိုက်ကြပါနော..။ မစံပယ်လည်း ကြော်ငြာခ လှမ်းတောင်းလိုက်ပါဦးမယ်..။ :D
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/19/2013 11:21:00 pm0comments
ဆိုတော့ Local Variables မှာ Literal နဲ့ Expression ဆိုပြီး Initial Value ဖော်ပြနည်း နှစ်နည်းရှိတယ်..။
Main Method ထဲမှာ Variable ကြေညာရင် Initial Value သတ်မှတ်ပေးရတယ်..။ မသတ်မှတ်ပေးရင် Error တက်ပြီပဲ...။ Main Method ထဲမှာ ကိုယ်ကသုံးတော့မှာမို့ Variable ကြေညာတာ..။ သုံးတော့မယ်ဆို သူ့တန်ဘိုးကဘာလဲဆိုတာ မသုံးခင်သိထားဖို့ လိုတယ်..။ ဒါကြောင့်မို့ တန်ဘိုးသတ်မှတ်ပေးရတာ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/18/2013 01:06:00 am0comments
OOP အခြေခံများ (သို့) C# အခြေခံများ..။
OOP ကို C# Language နဲ့ ပြမှာဆိုတော့ ကျွဲကူးရေပါဆိုသလို C# Language နဲ့လည်း ရင်းနှီးသွားမှာပါ..။ ကိုယ်က Java Language နဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင် Javaနဲ့ ပြောင်းစမ်းလိုက်ရုံပါပဲ..။
ဒါက Program တစ်ပုဒ်ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ပုံသဏ္ဍာန်ပါပဲ..။ Programရဲ့ မူလပင်စည်ရင်းမြစ်ပဲ..။ ကျန်တာတွေက သူကနေ အတက်ပေါက်..၊ အကိုင်းအခက်တွေ စည်ပင်လာမှာ..။ တစ်ခုချင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ စလေ့လာရအောင်..။
စာတွေက ပုံထဲမှာ တစ်ခါတည်း ရှင်းပြထားပါတယ်...။ ပုံကတိုက်ရိုက်တင်တာဆိုတော့ သေးနေတယ်..။ Image Shack ကနေ ပြန်တင်ပေးပါမယ်..။
Programတွေမှာ Variableကြေညာရလေ့ရှိတယ်..။ ကိုယ်ကြေညာချင်တဲ့ Variable ကဂဏန်းကိုလက်ခံချင်တဲ့ Variable ဆိုပါစို့..။
int i (or) int i=1;
အဲလိုကြေညာတဲ့အခါမှာ Variable တွေမှာ ပုံစံသတ်မှတ်ထားတာတွေ ရှိတယ်..။ ဂဏန်းလက်ခံမယ့် Variable အတွက် integer, စာကြောင်းလက်ခံမယ့် Variable အတွက် String (သို့) Character အစရှိသဖြင့်..။ သဘောက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Type ဆိုတာတွေက ခွက်ကလေးတွေနဲ့တူတယ်..။ ထည့်ချင်တဲ့အရာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ခွက်တွေကပုံစံတစ်မျိူးစီ ရှိကြတယ်..။
ခွက်ကလေးတွေနဲ့ နမူနာပြတာပါ..။ Type ဆိုတာ အဲလိုခွက်တွေနဲ့ တူတယ်..။ ထည့်မယ့်အရာပေါ်မူတည်ပြီး type ကိုသတ်မှတ်ပေးရတယ်..။ Program မှာရှိတဲ့ Type တွေကို အောက်မှာ ဇယားနဲ့ပြထားတယ်..။ ဘယ်နှစ်မျိူးရှိလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်းသိထားဖို့ လိုမယ်..။
boolean မှာ True, False လို့ တန်ဘိုးနှစ်ခုပဲ ရှိတယ်..။ စာကြောင်းတွေထည့်မယ်ဆိုရင် ("")မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ ထည့်ရေးတယ်..။ ဂဏန်းတွေမှာကျတော့ Signed နဲ့ Unsigned ဆိုပြီး ထပ်ခွဲထားသေးတယ်..။Signed ဆိုတာက အပေါင်းတန်ဘိုးရော..၊ အနူတ်တန်ဘိုးရောလက်ခံနိုင်လို့ သူကပိုကြီးတယ်..။ Unsigned ဆိုတာက သုညတန်ဘိုးကနေ အပေါင်းတန်ဘိုးတွေပဲလက်ခံတယ်...။ အနူတ်တန်ဘိုး လက်မခံဘူး..။ နေရာယူသက်သာတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရတယ်..။
ရေးရင်တော့ int(Signed Integer), uint (Unsigned Integer)လို့ u တစ်လုံးပဲ ပိုတာပါ..။ သူက Memory နေရာယူတာ သက်သာစေချင်လို့ အပေါင်းတန်ဘိုးသေချာတဲ့ Type တွေမှာ uint လို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်..။ (u ထည့်သင့် မထည့်သင့် ခေါင်းရှူပ်ခံစဉ်းစားမနေပါနဲ့..။ u မထည့်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..။ Program ကြီးလွန်းလို့ နေရာမဆန့်ရင်တောင် Program ထဲမှာပဲ မလိုတာတွေ ရှင်းပစ်တဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်..။ ရှိတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်..။)
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/16/2013 08:54:00 pm0comments
မန္တလေး မှောင် မှောင်သည်ဆီက မုန်လာဥချဉ် အလွမ်းပြေ..။
မစံပယ်က အစားကို အကုန်စုံအောင် စားတတ်တာ တွေ့ရပါတယ်..။ :D ချဉ်ချဉ်၊ ချိူချိူ၊ အီအီ.. အကုန်ကြိုက်ပါတယ် ရှင်..။ ဟင်းချက်နည်းဝက်ဆိုဒ်တကာကိုလှည့်ပြီး သွားရေကျတာလည်း ညတိုင်းနီးပါးပါပဲ...။ အချဉ်လေးလည်း စားချင်တယ်..။ လဘက်လေးလည်း စားချင်တယ်..။ အသားခြောက်ဖုတ်လည်း စားချင်တယ်..။ အကုန်စားချင်တယ်..။
မုန်လာဥချဉ်စားချင်တာ နည်းမတွေ့လို့ တော်တော်နဲ့ လုပ်မစားရဘူး..။ အခုတော့ ကျန်တဲ့စားစရာတွေက အီနေပြီမို့ မုန်လာဥချဉ်တည်ဖို့ အလှည့်ရောက်လာပါပြီ..။ မိုးကောင်းသူဝက်ဆိုဒ်ထဲက မြန်မာမုန်ညင်းချဉ်တည်တဲ့နည်းနဲ့ပဲ မုန်လာဥချဉ်ကို တည်ပါတယ်..။
၁။ ထမင်းအိုးအရင်တည်ပြီး ဆန်ဆေးရေယူပါတယ်..။
၂။ထမင်းမကျက်ခင် မုန်လာဥကိုအခွံခွာ၊ ရေဆေးပြီး အ၀ိုင်းပါးပါးလေးတွေ လှီးပါတယ်..။
၃။ခါကြက်ဥလည်း လှီးပြီး အစိပ်လေးတွေ စိပ်ပါတယ်..။
၄။ထမင်းကျက်ခါနီးရင် ထမင်းအိုးထဲက ထမင်းပူကို နှစ်ဇွန်းကြီးကြီးလောက် ကော်ယူပြီး အအေးခံထားပါတယ်..။
၅။ထမင်းအေးရင် ဟင်းခပ်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာလောက် ဆားကို ထမင်းပေါ်ထည့်ပြီး စိစိပါအောင် နယ်ပါတယ်..။
၆။ နယ်ပြီးရင် ရေဆေးထားတဲ့ မုန်လာဥဖြူ၊ ခါကြက်ဥတွေနဲ့ ထမင်းဆားနယ်ကို ဇလုံကြီးထဲမှာ ထည့်နယ်ပါတယ်..။
၇။နယ်ပြီးသွားရင် ဗူးခွံထဲထည့်ပြီး ဆန်ဆေးရေ လောင်းထည့်ပါတယ်..။ မီးဖိုထဲမှာပဲ ကျိူးတိုးကျဲတဲနေရောင်လေးအောက် ရောက်အောင် ထားထားပေးပါတယ်..။ သုံးရက်ထိမစောင့်နိုင်လို့ နှစ်ရက်နဲ့တင် ချဉ်သလောက်လေးနဲ့ ပဲမုန့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း..၊ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးထားတာနဲ့ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ ဆီထည့်ပြီး သုပ်စားပါတယ်..။ တော်တော်လေးစားလိုက်ရပါတယ်..။
ဒီနေ့တော့ မုန်လာချဉ်တင်မကဘဲ မုန်လာပွင့်တစ်ဝက်ကိုပါ ဒီနည်းနဲ့ပဲ အချဉ်တည်ထားလိုက်ပြန်ပါပြီ..။ အစားအသောက်ကတော့ အလုပ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ကိုင်နေရင်းကို စားချင်နေစိတ်က အတွေးကရောက်ရောက်သွားပြီး စားချင်နေတာပါ..။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ မစံပယ် ကိုယ်အလေးချိန်တွေလည်း တိုးနေပါတယ်...။ :D
အသိတစ်ယောက်က စားချင်တယ်ဆိုလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားတာလေးပါ..။ တစ်ခါသုပ်စားထားပြီးကာစ လက်ကျန်ကျန်တဲ့ပုံပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/14/2013 09:13:00 pm0comments
အခုရေးမယ့် OOP က C# Language သုံးပြီးရေးမှာပါ..။ C# ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Java ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံ OOP ကတော့ အတူတူပါပဲ..။ Java ဖြစ်ဖြစ်၊ OOP ဖြစ်ဖြစ် ဘာကိုပဲ စသင်သင် ပထမဆုံးအခန်းက Program တစ်ပုဒ် Run ရင် နောက်ကွယ်က ဖြစ်ပျက်သွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို စသင်လေ့ရှိပါတယ်..။ ကို့စ်ဆွဲထားတဲ့သူတွေကိုက ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို စပြောလေ့ရှိပါတယ်..။ ဒီအကြောင်းအရာတွေက Beginners တွေအတွက် အလွန်နားရှူပ်စေပါတယ်..။ စာရေးသူလည်း ဒီအခန်းကို တော်တော်နားလည်အောင်ဖတ်လည်း ဖတ်တုံးပဲ သဘောပေါက်လိုက်ပြီး ပြီးရင်မေ့သွားလို့ ပြန်ဖတ်ရပါတယ်...။ အဓိကပြောချင်တာတွေကတော့ User က Program တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ရင် Compiler က Execute လုပ်ပါတယ်..။ မှားရင် Compiler ကနေ Error ထွက်တယ်..။ မှန်ရင် Result ထွက်လာပါမယ်..။ ဒီလောက်ပဲအကြမ်းဖျဉ်းနားလည်ပြီဆို ရပါပြီ..။ စာရေးသူအနေနဲ့ဆို ဒီအခန်းကို နောက်ဆုံးမှ ပြန်ပြောချင်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံးခန်းရောက်ပြီဆိုရင် User တွေအနေနဲ့လည်း C# ကဘာလဲ..၊ Program ဆိုတာဘာလဲ သဘောပေါက်ချိန်မှ ဒီအခန်းကိုပြန်ရှင်းပြရင် နားလည်နိုင်တယ် စိတ်အခြေခံ ရှိနေပြီလို့ စာရေးသူယူဆပါတယ်..။
ဒီပုံကတော့ Program တစ်ပုဒ်ရဲ့ အကြမ်းဖျဉ်းသဘောတရားပါ..။ တော်တော်တော့ အကြမ်းဖျဉ်းဆန်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် Beginners တွေအတွက် ရည်ရွယ်လို့ အသေးစိပ်နားလည်အောင် ရေးလိုက်တာပါ..။ ဒီစာကိုရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က OOP သင်ကာစ Beginners တွေကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာမို့ပါ..။
အစပိုင်းသင်ကာစနေ့တွေမှာ ကိုယ်ကတော့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာ မှန်တယ်..။ ဒါပေမယ့် Error တွေ တစ်သီကြီးထွက်ချင်ထွက်နေတတ်ပါတယ်..။ Typing အမှား..၊ စာလုံးအကြီးအသေးအမှား..၊ (;) အပိတ်တွေကျန်လို့ များပါတယ်..။ ဒါတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျော်လွှားသွားရင်း ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် ရောက်တာပါပဲ..။ လူတိုင်းကျော်လွှားရမယ့် အဆင့်ပဲဖြစ်လို့ Error ပြရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အကြောင်းရင်းသိအောင်လုပ်ရင်း ပျော်ပျော်ကြီး ကျော်ဖြတ်ကြပါစို့..။
Program နဲ့ Result နဲ့ကြားထဲမှာ Compiler ဆိုတာလေး နောက်ကွယ်က အလုပ်လုပ်နေပါတယ်..။ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ Program ကို Compiler က Machine Language ကိုပြောင်းလိုက်တယ်..။ Machine Language က နားလည်တယ်..၊ Error မပါဘူးဆိုရင် Compiler ဆီကိုပဲ ပြန်ပို့ပါတယ်..။ Compiler ကနေပဲ လိုချင်တဲ့ Result ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်..။ ရှင်းအောင် ပုံလေးနဲ့ပြမယ်နော်..။ ဒါက Beginners တွေနားလည်အောင် စာရေးသူဘာသာရှင်းအောင်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေပါ..။ စာရေးသူက ဒီစာကို ဘာသာပြန်ရေးမှာမဟုတ်ပါဘူး..။ ကိုယ်နားလည်သလို ပြန်ရှင်းပြတဲ့ပုံနဲ့ ရေးမှာပါ..။ C# Courses တွေကို နားလည်အောင်ပဲဖတ်ပါတယ်..။ ကိုယ်နားလည်သလိုပဲ ပြန်ရှင်းပြပြီး ဘာသာပြန်ရုံ ရေးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ စာရေးသူလည်း ဘာသာပြန်ရုံလေးရေးထားတာဆို ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းတတ်လို့ပါ...။
ဒါက Compiler ဆီကနေ Machine ဆီ သွားတဲ့ အသွားပါ..။ Result မပေါ်သေးပါဘူး..။ Execute လုပ်ဆဲကာလပါ..။
ဒါကတော့ Machine Language က Compiler ဆီပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ အပိုင်းပါ..။ မှန်ရင် Result ထုတ်ပေးပါမယ်..။ စာတစ်တန်ပေတစ်တန်ရေးနေရပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးက စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါ..။ Developer တွေကတော့ ဒါကိုသိထားရပါမယ်..။
Program တစ်ပုဒ် ဘယ်လို Run မလဲ..။
နောက်အခန်းကနေစပြီး Program တွေစမ်းရပါမယ်..။ ဒီလိုစမ်းဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ဆို Visual Studio 2010 တစ်ခွေကိုဝယ်ပြီး Install လုပ်စေချင်ပါတယ်..။ ခွေဝယ်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ ပြည်ပကလူတွေအတွက် Microsoft Website က Visual Studio 2010 Express Version ကို အလကားပေးထားပါတယ်..။ သူ့ကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်စေချင်ပါတယ်...။ < href="http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads">အဲဒီလင့်မှာ Install Now ကိုကလစ်ရုံပါပဲ..။ Install လုပ်ချိန်ကတော့ နာရီဝက်ကနေ ၄၅ မိနစ်လောက် ကြာတတ်ပါတယ်...။ Memory လည်းတော်တော်များများ နေရာယူမှာမို့ စက်မှာနေရာမရှိရင် နေရာအရင်ရှင်းစေချင်ပါတယ်..။ 200Mb ကျော်ကျော်လောက် ရှိပါတယ်..။ Install လုပ်တဲ့ အဆင့်တွေကိုလည်း ထည့်မရေးတော့ပါဘူး..။ < href="http://geekswithblogs.net/Ramaraju/archive/2009/05/24/step-by-step--installing-visual-studio-2010.aspx">အဲဒီလင့်မှာ Install လုပ်နည်းတစ်ဆင့်ချင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်..။ သေချာအောင်လို့ အဲဒီရှင်းပြချက်တစ်ဆင့်ချင်းကိုကြည့်ပြီးလုပ်ရင် အမှားနည်းလို့ အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်..။
Program တွေ မ Run ခင် Folder အရင်ဆောက်သင့်ပါတယ်..။ စာရေးသူကတော့ D:> အောက်မှာ folder တစ်ခုဆောက်ထားပါတယ်..။ ဒါမို့လို့ စာဖတ်သူကိုရော D:>အောက်မှာ ဆောက်စေချင်ပါတယ်..။ ဒါမှ စာရေးသူရှင်းပြရင် နားလည်မှုမမှားစေချင်လို့ပါ..။ Folder တစ်ခုဆောက်ပြီး အဲဒီ Folder ထဲမှာ File ကိုသိမ်းပြီး command prompt ထဲကနေ လှမ်းRun ရမှာပါ..။ Start-->Program-->Visual Studio 2010-->Visual Studio 2010 (tool)--> Command prompt (2010) ကိုရွေးပါ..။ Command prompt ထဲရောက်သွားရင် သူက C:> အောက်ကို ပုံသေပေးထားတတ်တာများပါတယ်..။ cd.. နဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ရပါမယ်..။ cddနဲ့ Directory ပြောင်းယူရပါမယ်..။ cd class(ကိုယ်ပေးထားတဲ့ ဖိုဒါနာမည်) လို့ရေးပြီး ကိုယ်သိမ်းတဲ့ ဖိုဒါအောက်ကို ပို့ရပါမယ်...။
တကယ် Run တော့မယ်ဆို ပြန်ပြောပါမယ်..။ မြင်သာတဲ့ ဥပမာအနေနဲ့ကတော့
C:/ cdd(C အောက်ကနေ D အောက်ကို ချိန်းတာ..။)
D:/ cd class (ကိုယ်သိမ်းတဲ့ ဖိုဒါအောက် ၀င်တာ..။)
D:/Class/csc First.cs(Compile လုပ်တာ..။)
D:/Class/First (Run တာ..။)
နောက်အခန်းမှ Theory ပြီးရင် လက်တွေ့ Program Run ပါတော့မယ်..။
အခြေခံ အပိုင်း(၁) ဆက်ရန်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/14/2013 08:10:00 pm0comments
မစံပယ်တို့ငယ်ငယ်အချိန်တွေတုံးကတော့ မစံပယ်တို့အဒေါ်တွေကပဲ ဘယ်လိုနေသင့်တယ်..၊ ဘယ်လိုမပြုမူသင့်ဖူး..၊ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာတွေ တတွတ်တွတ်နဲ့ သွန်သင်ဆုံးမတတ်ကြပါတယ်..။ မစံပယ်တို့အရွယ်တွေရောက်လာတော့ မစံပယ်တို့သွားလာရာတိုင်းမှာ အဒေါ်တွေလိုက်ပါဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းသွားပါပြီ..။ နေရာတကာ သူတို့သွန်သင်မှုကို လိုချင်နေလို့ မရတော့ဘူး..။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သင့်မသင့် ရာမရာ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးလုပ်တတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ကိုယ့်ကြောင့် မိဘ၊ ဆရာသမားတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျမသွားအောင် သတိနဲ့နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ ကြိုးစားလာမိပါတော့တယ်..။
မစံပယ်စာမရေးဖြစ်ဘဲ စာတွေဖတ်နေဖြစ်တာ ကြာပါပြီ..။ လေ့လာစရာ တော်တော်များများလည်းရှိနေတာမို့ စာရေးတာကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာပါ...။ မစံပယ်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇ၀ါသနာကဘာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးမိတော့ စာဖတ်တာ၊ စာရေးတာ၊ တရားနာတာနဲ့ တရားထိုင်တာ..။ ရံဖန်ရံခါ သီချင်းဆိုဖို့ ၀ါသနာပါတာတွေ့ရပါတယ်..။ အဲဒီတော့ ၀ါသနာဖြစ်တဲ့ စာရေးတာလေးကိုတော့ အချိန်လေးပေးပြီးလုပ်ဦးမှလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးနေမိပါတယ်..။ စာကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာပဲ တမေ့တမောလိုက်ဖတ်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ ကွန်းမင့်တွေရေးရင် မဆုံးနိုင်တော့လို့ ကွန်းမင့်မရေးဖြစ်အောင် နေလိုက်ပြီး ဘလော့လေးကိုဖုန်သုတ်ဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်..။စာရေးတဲ့အခါမှာလည်း အချိန်ကုန်သက်သာအောင် စာရွက်ပေါ်မှာတစ်ခါချရေးထားပြီးမှ တိုက်ပင်ရိုက်ပါတော့တယ်..။ စဉ်းစားချိန်လျော့ကျသွားပြီး ရေးပြီးသားကိုလိုက်ရိုက်ရတာမို့ အချိန်ကုန် အလွန်သက်သာပါတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က မစံပယ်နဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော် ကွဲကွာသွားခဲ့တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်လိုခင်ရတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာ ဆွမ်းကျွေးလို့ ထမင်းစားဖိတ်လို့ သွားခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီအစ်မနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး ထမင်းစား၊ ထမင်းစားပြီးတော့ အစ်မရဲ့အမေနဲ့ စကားတွေမနားတမ်းထိုင်ပြောနေရင်း အစ်မရဲ့အပြောအဆို၊ အပြုအမူထဲက သဘောကျစရာတစ်ချက်ကို တွေ့ခဲ့ရလို့ ဒီစာရေးဖြစ်သွားတာပါ..။
မစံပယ်ရဲ့အကျင့်က လူရင်းတွေဆို ဘာဟိတ်ဟန် ဘာပကာသနမှ မရှိဘဲ ပြောဆိုဆက်ဆံရင်း၊ သူတို့နဲ့စကားတွေပေါရင်း အကျွေးအမွေးကိုလည်း လူရင်းတွေလိုပဲ ဘာမှကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်မနေတော့ဘဲ ၀ိုင်းဖွဲ့စားလိုက်မှာပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်တစ်ချို့ဖိတ်ထားသေးပြီး ဧည့်သည်တွေကလည်း အချိန်အဆင်ပြေသလိုရောက်လာနေကြတော့ ဧည့်ခံတဲ့အစ်မက ဟင်းတွေအနားမှာပဲနေပြီး လိုလေသေးမရှိအောင် စီမံနေတာကို တွေ့ရပါတယ်..။ အသားဟင်းတွေအများကြီးကို ဟင်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ လှပအောင်တစ်ချိန်လုံးစီမံနေတာ၊ မစံပယ်တို့ သူတို့အိပ်ခန်းထဲမှာ စကားပြောနေတာကို တချက်တချက်ပဲဝင်လာပြီး ရှေ့ကဧည့်သည်တွေနားမှာပဲ သင့်တော်အောင်စီမံနေတာကို မစံပယ်တွေ့လိုက်တော့ ကိုယ်နဲ့တော်တော်ကွာပါ့လားလို့ သတိထားလိုက်မိပါတယ်..။
မစံပယ်သာဆွမ်းကျွေးလုပ်ရင် သူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းထိုင်စကားပြော၊ လေပန်းရင်း ဘယ်ဟင်းဘယ်လောက်ကျန်ဖို့၊ ဘယ်လိုချန်ဖို့ကို မေ့နေမိမှာပါ..။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝမ်းသာအားရ စကားပြောရင်း ကျန်တာတွေ အရေးစိုက်မိမှာ မဟုတ်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဲဒီအစ်မကိုယှဉ်တွေးမိပြီး အဲဒီအစ်မဆီက ကောင်းတဲ့အကျင့်လေး ကူးယူလာတာကို အမှတ်ရရင်း ဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်..။
မစံပယ်ဆိုရင် မီးဖိုထဲမှာ ချက်စရာတွေပေါလှပါတယ်..။ စိတ်ထဲမှာ စားချင်တာတွေဝယ်ထားပြီး မစားချင်တာတွေ ချောင်ထိုးထားပြီး သုံးမရတော့မှ လွှင့်ပစ်တတ်ပါတယ်..။ လွှင့်မပစ်ရအောင် မစားချင်ပေမယ့်လည်း အထားခံအောင်ပြုပြင်စီရင်တာမျိူး မရှိတော့ အမေပို့သမျှ စားလို့ကုန်တာတစ်ဝက်၊ မစားဘဲလွှင့်ပစ်ရတာ တစ်ဝက်နဲ့ ချီတက်နေခဲ့ါတယ်..။
ဒီနေ့တော့ အဲဒီအစ်မဆီက ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးယူခဲ့မိတာမို့ မီးဖိုထဲက မစားချင်သေးပေမယ့် ပုပ်သိုးသွားနိုင်မယ့် စားစရာတွေကိုရှာပြီး သင့်တော်အောင်စီမံရေး လုပ်ပါတယ်..။ မှိူတက်ချင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အာပြဲခြောက်ရယ်၊ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ သရက်သီးကုလားတယ်တွေရယ်ကို ရေရှည်အထားခံအောင် ကြော်ပြီးသိမ်းရင်း သူတစ်ပါးဆီကကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးရပါတယ်....။
ရေဆေးထားတဲ့ အာပြဲခြောက်တွေ ကြော်ကာနီး..။
တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ သရက်သီးကုလားတယ်တွေ..။ အခုမှ ကြော်ရတယ်..။ ကောင်းမှကောင်း..။
အသက်တွေရလာပြီး မိဘ၊ အဒေါ်တွေ ကိုယ်နဲ့မကွာပါလာဖို့ ခဲယဉ်းကြတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေရသူတွေအနေနဲ့ သူတစ်ပါးဆီက ကောင်းတဲ့အကျင့်ကို အတုယူပြီး..၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ကိုယ့်မှာလည်းမရှိစေဖို့ ကြိုးစားရင်း ကိုယ့်ရဲ့မိဘ၊ ဆွေမျိူး၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ့်ကြောင့်မထိခိုက်အောင် ထိန်းပြီး ကြိုးစားနေထိုင်ရပါတယ်...။
ဆွမ်းကျွေးက ငပိချက်..။ မစံပယ်လည်း အိမ်မှာချက်စားတာ ကောင်းမှကောင်း..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/13/2013 09:44:00 pm0comments
ချစ်စရာ့ OOP....။ (စကားချီး)
ချစ်စရာ့ OOP ဆိုပြီး OOPအကြောင်း ရေးသားသွားဖို့ စိတ်ကူးရလာတာ ကြာပါပြီ..။ စစိတ်ကူးရတုံးက ကိုယ်တိုင်ကလည်း OOP ကိုလေ့လာဆဲအချိန်၊ မပိုင်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်ပဲရှိသေးလို့ OOP ရဲ့သဘောတရားကို ကိုယ်တိုင်နားမလည်သေးတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပိုနားလည်လာအောင် ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်..။ နားမလည်တဲ့အပိုင်းတွေကို ပိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီစာကို စရေးတော့တာပါပဲ..။
ချစ်စရာ့ OOP လို့ ခေါင်းစဉ်ကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့ အမြင်ကတ်လို့ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပေးတာပါ..။ တော်တော်နဲ့သဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ပဲ သူများတွေကိုယ့်ကိုသင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာ နို့သက်ခံစို့ဖို့စောင့်နေခဲ့ရင်း အချိန်တွေတော်တော်ကုန်ခဲ့ပါတယ်..။ ဘယ်လိုရှင်းပြပြ မရမှန်းသိတော့မှ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်လာတော့မှ အော် OOP ဆိုတာ ဒါပါလားဆိုပြီးတော့မှ ဒီစာကိုရေးဖို့ စိတ်ကူးတော့တာပါ..။
လေ့လာလိုက်တော့ အခြေခံတစ်ခေါက်ပြီးသွားတော့ နားလည်တာ တစ်အုပ်စု၊ နားမလည်တာတစ်အုပ်စု ထွက်လာပါတယ်..။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လေ့လာလိုက်တော့ နားမလည်တဲ့အုပ်စုက တစ်ဝက်လောက် ထပ်နားလည်သွားပါတယ်..။ အကုန်နားလည်တာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး..။ အခုဒီစာကိုရေးချိန်ထိ မရသေးတဲ့ အပိုင်းတစ်ချို့ကျန်နေပါသေးတယ်..။အတွေ့အကြုံလိုနေသေးလို့ နားမလည်သေးတာလို့ ထင်ပါတယ်..။ နောက်တော့တဖြည်းဖြည်း နားလည်သွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ်..။
စာရေးသူက OOP ကိုဆရာနဲ့ ၃ ခါတိုင်တိုင် သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ပထမတစ်ခါကတော့ ကျောင်းမှာ တတိယနှစ်မှာ စသင်ရတာပါ..။ သင်တဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော်တို့ကိုသင်မယ်ဆိုမှ စာဖတ်ပြီးသင်တာမို့ သူကိုယ်တိုင်က ရှင်းပြရင်း လည်ထွက်နေပါတယ်..။ သူကိုယ်တိုင်လည်း OOP က ဘာဆိုတာ လေ့လာဆဲမို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မသင်နိုင်တာပါ..။ စာရေးသူကလည်း ဆရာသင်မှဆိုပြီး ဆရာဆီက ဇွန်းနဲ့ခွံ့ကျွေးတာကို အလိုက်သင့်စောင့်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးရှိတော့ ဆရာကိုယ်တိုင်က နားမလည်သေးဘူးလို့ ၀န်ခံသံကြားလိုက်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ပဲ အတော်အောင်အောင် အားထုတ်ပြီး အတန်းအောင်အောင် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်...။ ဒီပညာနဲ့ ကိုယ်ကအသက်မွေးမယ်လို့လည်း အမြင်မရှိတာလည်း ပါပါတယ်...။ စာမေးပွဲအောင်ရင်ပြီးရောလို့ပဲ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်...။
နောက်တစ်ခါ ကျောင်းကဘွဲ့တွေပြီးတော့လည်း OOP သင်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာမဆီမှာ သေချာထပ်သင်ပါသေးတယ်..။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ဒီဘာသာရပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတော့မှာလို့ ရေးရေးသဘောပေါက်နေပါပြီ..။ ဒါပေမယ့် သူများသင်ရင် တတ်မယ်လို့ပဲ ယူဆနေတုံးပါ..။ ကိုယ်ဘာသာ ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာ စာရေးသူရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀တွေမှာ အိပ်မက်တောင် မမက်ဘူးခဲ့တာပါ..။ဆရာမကလည်း စာရှင်းပြရုံလောက်သင်သွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမရှိ၊ ဘာလည်းမရှိ..။စာသင်ချိန်တိတိကျကျမရှိဘဲ ဆရာမကိုလိုက်ဖမ်းနေရတာဆိုတော့ သင်တန်းခပဲ ပက်ပက်စက်စက်ပေးခဲ့ရပြီး ၂ ချိန် ၃ ချိန် သင်ရုံ၊ အိယောင်ဝါးနဲ့ပဲ ပြီးသွားပြီး သဘောမပေါက်ပြန်ပါဘူး..။ :(
တတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ သေချာကောင်းကောင်းသင်ရပါရဲ့..။ သင်ပေးတဲ့သူက သူ့အတွက် ဒီသင်ရိုးက ရိုးသွားပြီ..။ အသင်ခံရတဲ့သူတွေက ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်..။ သူသင်ပြီးသား သဘောပေါက်ပြီးသားလူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိဟန်မတူဘူး..။ ဗလပ် ဗလပ်နဲ့ ကြက်တူရွေးစာအံသလို ရွတ်ရွတ်သွားပြီး ဘာလေးမေးမေး ကောင်းကောင်းမဖြေချင်တဲ့ ဆရာမပီသတဲ့ သင်တန်းနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ အခုမှအဲဒီသင်ရိုးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်မိတော့ သင်ရိုးကတော့ တော်တော်ကောင်းမွန်တာ တွေ့ရပါတယ်..။ သင်တဲ့နည်းပြက နိုင်ငံတကာကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နည်းပြတွေလို မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ပဲသင်တဲ့ ဘလန်းဘလန်း နည်းပြဖြစ်နေတာက ဆိုးတာပါ..။ အဲဒီဆရာမသင်ကြားမှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်ကို Vote ပေးတဲ့အခါ ဆရာမအလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်လို့ မှတ်ချက်ဆိုးဆိုးရွားရွားတော့ မရေးခဲ့ပေမယ့် သင်ရတဲ့ အချိန်နဲ့ အားစိုက်မှုအတွက်တော့ နှမြောမိတာ အမှန်ပါပဲ..။ အဲဒီသင်တန်းကနေ ဘာမှမရခဲ့ဘူး..၊ ဘာမှနားလည်ခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်..။
အဲဒီတုံးက ကိုယ်ကမသိခဲ့တာက အတတ်ပညာတစ်ခုကို သူများသင်ပေးနေရုံနဲ့ တတ်မယ်လို့ယူဆခဲ့တာကိုပါ..။ အခုမှသဘောပေါက်လာတာက အတတ်ပညာတစ်ခုက အစပိုင်းတော့နားလည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကိုယူကောင်းယူရမယ်..။ ပြီးရင်တော့ ကျန်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်သွားရမယ်..။ ဒါမှတကယ်နားလည်တတ်မြောက်တယ်ဆိုတာ တွေ့လာရတော့ Self Study လုပ်ရတာကို စာရေးသူတော်တော်နှစ်ခြိုက်လာပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ၊ ကိုယ်တိုင်သိလိုက်ရတာမှ တကယ်သိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါလားဆိုတာ သဘောပေါက်လာလေ ပိုလေ့လာချင်စိတ် ဖြစ်မိလေ ဖြစ်လာပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်စာရေးသူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်မိတာကတော့ တစ်ခုခုကိုယ်နားလည်ထားတယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးကိုလည်း နားလည်အောင်ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်..။ တစ်ချို့လူတွေက ကိုယ်နားလည်တာကို သူတစ်ပါးနားလည်အောင်ပြောဆိုရင် မပြောတတ်ကြတာ များပါတယ်..။ စာရေးသူရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝမှာ ကိုယ်နားလည်ထားတာကို သူတစ်ပါးကလိုချင်တယ်..၊ လက်ခံတယ်ဆိုရင် နားလည်အောင် ပြောပြတတ်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နားလည်အောင်လုပ်ရတဲ့အဆင့်တွေက စာရေးသူအတွက် ပိုခဲယဉ်း၊ ပိုအချိန်ယူရပါတယ်...။ လက်ပေါက်ကတ်တတ်တဲ့ စာရေးသူ သဘာဝကြောင့် တော်တော်တန့်တန့်နားလည်ရုံနဲ့ နားလည်ပြီလို့ မသတ်မှတ်လို့ နားလည်ပြီဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အောင် တခါတရံ တော်တော်အချိန်ပေးရတတ်ပါတယ်..။
နောက်အခန်းကတော့ OOP နိဒါန်းလာပါမယ်..။ စကားချီးကို ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/13/2013 08:15:00 pm 1 comments
ကျာက်ကပ်ဝေဒနာသည်များဝမ်းမြောက်ဖွယ် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာခံစားနေရသူများမှာ လူလည်းပင်ပန်း၊ငွေကြေးကုန်ကျမှု့ များပြားသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သိန်းထောင်ချီ၍ ချမ်းသာသောသူပင် ဒေ၀ါလီ ခံ ရသော ရောဂါ ပါ ။ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများမှာ လူလည်းနာ ငွေလဲကုန်လှပါသည်။အချိန်အခိုက်အတန့်တခုသာ ထိန်းထားနိုင်ပြီး မရဏမင်းထံ သွားရသည်သာများပါသည်။ လဲလှယ်နိုင်မှသာ အသက်ဆက်နိုင်ပါသည်။ လဲဖို့စားရိတ်ကလည်း သိန်းထောင်ကျော် ကုန်ကျပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျောက်ကပ် ဝေဒနာသည်များ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်ခါစတွင်ပျောက်ကင်း၍ နာတာရှည် ခံစားနေရသူ များသက်သာပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများ အကြိမ်ရေ လျော့ပါးလာစေရပါမည်ဟု လုံးဝအာမခံပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ခံစားခဲ့ဖူးပါသည်။သိသိခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် သုံးလအတွင်း ပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ စရိတ်သက်သာ အကုန်အကျနည်း၍ လုံးဝအထင်မသေးပါနှင့်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံမည်ကြီးနေပြီဖြစ်သည့် HERBAL MEDICINE ကုသနည်းပါ။အနောက် နိုင်ငံများတွင်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပြားလာသည့် အနောက်တိုင်းဆေးများကို သောက်သုံးရန် ချင့်ချိန်လာကြပြီး သစ်ဥသစ်ဖု သဘာဝအပင်များမှ ထုတ်ယူသောဆေးများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ထုတ်လုပ်သည့် fame ဆေးတိုက်မှဆေးများ ကမ္ဘာတွင် နံမည်ရနေပါပြီ။ယခုတင်ပြသောဆေးနည်းမှာ ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် သုံးစွဲခဲ့သောနည်းပါ။
၁။ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းချိုကို နေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။(အသား၊ငါး မရောပါနှင့်၊ရောဂါမရှိသေးသူများသောက်ပါကဆီးကောင်းစေပြီး၊ယောက်ျားများအတွက်၊ယောက်ျား ပီသစေပါသည်)
၂။တရုပ်နံနံပင်ငါးရွက်ကို ရေနွေးဖြူထဲတွင် ထည့်စိမ်ပါ။လဖက်ခြောက်ခပ်၍ရေနွေးသောက်သလိုသောက်ပါ။အဖတ်ဝါးစားပါ။ညနေစာစားပြီး နာရီဝက်ခန့် ခြားပြီးမှသောက်ပါ။ အိပ်ချိန်နှင့်ဝေးပါစေ။သွေးတိုးပါကျစေသဖြင့် မျက်လုံးကြောင်တတ်ပါသည်။ည ခုနစ်နာရီဆိုလျင် သင့်ပါသည်။
၃။ကျောက်ကပ်ကြောင့် အသည်းအသန်အောင့်နေသူများ ကျောက်ဖရုံသီးကို ခွဲ အူတိုင်ထုတ်ပြီး ကျောက်ကပ်နေရာသို့ အတွင်းသားဖြင့်ကပ်၍ စည်းထားပါ။ ဖြေးဖြေးသက်သာလာပါမည်။
၄။ရေပူစမ်းနှင့်နီးပါက တပါတ်တစ်ကြိမ်ချိုးပါ၊မနီးပါက ရေနွေးနှင့်ချိုးပြီး ချွေးအောင်းပါ။
သုံးလအနည်းဆုံးထားပြီး ဆောင်ရွက်ပါ။ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများပင် အကြိမ်ရေ လျော့လာသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ ပျောက်ကင်းသက်သာပါက လူတိုင်းအားဖြန့်ဝေပါ ။ မသက်သာပါက ကျွန်တော့်အား စိတ်ဆိုးကြပါ။ယနေ့အချိန်အထိတော့ လာရောက်ကျေးဇူးတင်သူသာရှိပါသေးသည်။သက်သာကြသူသာတွေ့ရသဖြင့်အများအသုံးချနိုင်စေရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်ရပါသည်။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/13/2013 07:33:00 pm0comments
၁။ လူကြီးလူကောင်းများနှင့် လည်းကောင်း၊ လူစိမ်းများနှင့် လည်းကောင်း စကားပြောလျှင် ခေါင်းငုံ့၍မပြောပါနှင့်၊ ထိုသူကိုကြည့်၍ပြောရာ၏။
၂။ စကားပြောဆိုရာတွင် ရှက်ကန်းကန်းလည်းမဖြစ်နှင့်၊ ရဲတင်းလွန်းသောအမူအရာဖြင့် မဖွယ်မရာလည်းမပြုနှင့်၊ (သူတစ်ပါးသည် သင့်အားအပြစ်ရှာနေသည်ဟုမထင်နှင့်)။
၃။ သူတစ်ပါးစကားပြောလျှင် ကြားဖြတ်၍မပြောရ၊ ထိုသူ၏စကားဆုံးအောင် စောင့်ဆိုင်းရာ၏။ အကယ်၍ စိတ်မပါသ့ည့်တိုင်အောင် စိတ်မပါသည့် အမူအရာမပြဘဲ စိတ်ပါသကဲ့သို့ နားထောင်ရာ၏။
၄။ ဖြည့်စွက်၍ပြောရန်ရှိသော်လည်း ထိုသူစကားပြီးဆုံးမှ ယဉ်ကျေးသောအမူအရာနှင့် ရိုသေစွာဖြည့်စွက်ရမည်။(မိမိတတ်ကျွမ်းနားလည်ကြောင်း ပြလိုသည့် သဘော၊ ဆရာလုပ်လိုသည့် သဘောဖြင့် ပြောဆိုခြင်းမပြုရ)။
၅။ သူတစ်ပါး၏ အပြစ်ကို ပြောဘဲ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။ သို့မဟုတ် အကောင်းကိုသာလျှင် ပြောရာ၏။ အကောင်းချီးမွမ်းရန်မရှိလျှင် မပြောဘဲနေရာ၏။
၆။ ဒေါသထွက်နေသူတစ်ဦး၏ အတုံ့ အပြန်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏၊ တစ်ယူသန်သူနှင့်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုခြင်းမပြုအပ်၊ ထိုသူနှင့် မလွှဲမရှောင်သာ၍ ပြောရလျှင်ဖြည်းညင်းစွာ၊ ချိုသာစွာ ပြောဆိုအပ်၏။
၇။ မိတ်ဆွေအချင်းချင်းပင်လျှင် မနှစ်သက်ဖွယ်သော စကား၊ အကျိုးမရှိသောစကားကို မပြောရာ၊ ပြောလေ့ရှိလျှင် အကျင့်ပါတတ်၏။
၈။ လူကြီးလူကောင်း မိကောင်းဖခင် သားသမီးပီသစွာ ရိုင်းပျသော စကားအသုံးအနှုန်းကိုရှောင်ကြဉ်ရာ၏၊ စိတ်ဆိုးသောအခါမှာပင် မသုံးမိစေရန် သတိထားရာ၏၊ (လျှာကိုထိန်းနိုင်လျှင် ကိုယ်ကို ထိန်းနိုင်လာလိမ့်မည်)။
၉။ မကောင်းသောစကားကို မပြောမိစေရန်၊ မကောင်းသောအလုပ်ကို မလုပ်မိစေရန် သတိကြီးစွာ ထားရာ၏။ သူတစ်ပါးပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေပါလျှင်ရှောင်၍သွားရာ၏၊ တစ်စုံတစ်ရာအား ပေးခြင်း၊ မပြုဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေရာ၏။ ရွယ်တူချင်းဖြစ်သော် ဆုံးမရာ၏။ ( ဤကား ဝတ္တရားဖြစ်ကြောင်း မမေ့အပ်)။
၁၀။ မိမိနှင့် မဆိုင်သောနေရာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်း အလုပ်အကိုင်များတွင် မပါမဝင် ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။
၁၁။ မိမိနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စဖြစ်စေကာမူ မိမိအား သိစေသော အခါမှသာလျှင် သိရာ၏၊ သိလိုဇောနှင့် လောဘတကြီး စကားမဆုံးမီ မေးမြန်းခြင်းမပြုနှင့် ၊ အခွင့်ကိုစောင့်၍ မေးသင့်မှမေးရာ၏။
၁၂။ အခြားသူများ၏ အာရွက်စားတမ်းများအား စောင်းငဲ့ ၍ပင် မကြည့်ရာ၊ (စည်းကမ်းစနစ်ကြီးသူဖြစ်ပါစေ)။
၁၃။ မိမိဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါက မညည်းညူပါနှင့်၊ ညည်းတွားတတ်သူသည် မည်သည့်နေရာမျှ အသုံးမဝင်ချေ၊ အများ၏ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရုံမျှမက ကြားသူတို့စိတ်တွင် မနှစ်မြို့မှုကိုဖြစ်စေသည်။
၁၄။ မည်သည့်အခါမဆို မျက်နှာကိုကောင်းစွာထားရာ၏။ မကောင်းသောဘေးဒုက္ခ တွေ့သည့်အခါမှာပင် စိတ်မညစ်ဘဲ မှတ်သားရန် သင်ခန်းစာရပေသည်ဟု အကောင်းဘက်က ယူရာ၏။
၁၅။ ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာကို ထားနိုင်သမျှထားပါ။
၁၆။ စကားပြောချိုခြင်းသည် ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာသော အမူအရာဖြစ်၍ မိတ်ဆွေပေါများကြောင်းဖြစ်၏၊
၁၇။ ယဉ်ကျေးသော စကားအသုံးအနှုန်းတို့ကို အစဉ်အမြဲ သတိထား၍ သုံးပြီးလျှင် စိတ်ချမ်းသာစွာ မျက်နှာထားချိုသာ ရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ။
Credit - Original up-loader
Posted by ကြည်မြန်မာ at 1/03/2013 07:16:00 pm0comments
Cover Letter ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလည်း - နိဂုံးပိုင်...
Cover Letter ဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲ ( အပိုင်း - ၂ )...
မန္တလေး မှောင် မှောင်သည်ဆီက မုန်လာဥချဉ် အလွမ်းပြေ.....